* Light Of Myanmar *: သတ္တိုရှိသူများအတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်
အပေါ်က စက်ဝိုင်းတွေကိုကြည့်ပါ။ လည်နေလား? ငြိမ်နေလား? လည်နေတယ်လို့ ထင်တယ် မဟုတ်လား? တကယ်ကတော့ မလည်ပါဘူး။ ငြိမ်နေပါတယ်။ ဒီပုံဟာ ဦးဏှောက်နဲ့ မျက်စိ ရဲ့ အားနည်းချက်ကို လေ့လာပြီး ရုပ်ပုံကို လည်နေတယ်ထင်အောင် ဆေးရောင်တွေကို စံနစ်တကျ ခြယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးဏှောက်ဟာ လိမ်ရတာ သိပ်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။ အဲဒီပုံလိုပါပဲ ဒီမိုမီဒီယာတွေဟာ စကားလုံးတွေကို စံနစ်တကျအသုံးပြုပြီး လှည့်ဖျားနေတယ်ဆိုတာ သတိမပြုမိကျတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။
အခုဆိုရင်ဗျာ လူတွေက ဒီမိုကရေစီဘယ်လို ရအောင် လုပ်သင့်တယ်။ တချို့ကတော့ အကြမ်းနည်း ၊ အနုနည်း မျိုးစုံသုံးပြီး ရအောင် ယူမယ်ဆိုပဲ။ နအဖ ဘလော့တွေကတောင် ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကို လက်ခံပြီး ဒီမိုကရေစီ ရအောင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အသံထုတ်နေပါတယ်။ ပိတောက်မြေလို အရမ်းအဆင့်မြင့်တဲ့ ဘလော့မှာတောင် ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေမှာ အဓိက အကြောင်းတွေ မပါသလိုမြင်နေရပါတယ်။
မြန်မာတွေက ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားသလို အမှန်တကယ်ကျင့်သုံးလို့ရတယ်လို့ တရားသေ တွက်ထားပြီးပြောဆိုဆွေးနွေးနေကျပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ရဲ့ အနှစ်သာရထက် အဲဒါတွေဟာ လက်တွေ့ ကျင့်သုံးလို့ရရဲ့လားဆိုတာကို အမှန်အတိုင်း ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး တကယ်ရော ကျင့်သုံးရဲ့လားဆိုတာလဲ တွေးရပါမယ်။ သတ္တိုရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်သတ္တိုရှိဖို့လိုတယ်ပြောနေလဲဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ လုံးလုံး အရိုးထိအောင်ရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတကယ်မရှိပါဘူးလို့ မြင်လာတဲ့အခါမှာ ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေကို နှမြောတမ်းတဖြစ်ကျမယ့် အရေးရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီစံနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေ ဒါတွေကို ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ ဘာအပြစ်အနာအစာမှ မရှိသယောင် ပြောဆိုနေတာတွေဟာ အင်မတန်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် လက်ရှိဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်။ ဘာတွေသင်ခန်းစာယူပြီး အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲဒါမျိုးမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုး စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အခုရှုပ်မှနောင်ရှင်းဆိုသလို နအဖက ဒီမိုကရေစီပေးသည်ဖြစ်စေ မပေးသည် ဖြစ်စေ ဒီမိုကရေစီကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် အပြစ်အနာအဆာတွေနဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ရေရေရာရာ သိဖို့လိုပါတယ်။ သူများပြောလို့ သရေကျတယ်ဆိုတာ မျိုးတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ဦးဏှောက်မရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်လေ။
ဒီမိုကရေစီရဲ့ အဓိပါယ်က ပြည်သူ့အာဏာလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီး လာပြောမနေနဲ့။ အဲဒီလှလှပပ စကားလုံးတွေနဲ့ မက်လုံးပေးလို့ အရေပျော်သွားတဲ့ထဲမှာ တောသားနှစ်ယောက် မပါဘူး။ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရားက ဟောကြားဖူးပါတယ်။ စကားလုံးဆိုတဲ့ ရွံ့နွံထဲမှာ နစ်မနေပဲ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီကိုလက်တွေ့ ယူလို့မရသေးပေမယ့် လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပျက်ပုံတွေကို အနီးကပ်လေ့လာကျရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ပထမဆုံး သတိပေးချင်တာကတော့ brain wash အလုပ်ခံထားရတဲ့ ကိစ္စလေးပြောချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ စစ်အစိုးရဆိုတဲ့ စကားလုံး၊ အာဏာရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြားရင် ရွံမုံန်းဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား? ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စကားလုံးကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အေးမြသွားတယ် မဟုတ်လား? နအဖ စစ်အစိုးရက အမှန်တကယ် ရက်ရက်စက်စက် လုပ်လို့ မုန်းနေတယ်လို့ ထင်နေတယ်မဟုတ်လား? အဲဒါမဟုတ်ဘူးဗျ။ ကိုထင် ကုတင်ရွှေနန်းဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့ကို ဒီမိုမီဒီယာတွေက brain wash လုပ်ထားလို့ အဲလိုဖြစ်နေတာ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ တရုပ်စစ်စစ်ဦးရှုမောင် နဲ့ မြန်မာစစ်စစ် ဦးသန်းရွှေ အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်တွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။ သူတို့ လက်ထက်မှာ ဘယ်တုံးကမှ အမေရိကန် အစိုးရလို တနေ့တည်း လူတစ်သောင်းလောက် ဗုံးခွဲသတ်ပြစ်တဲ့ 9/11 လိုသတ်ဖြတ်မှုမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ukနိုင်ငံလို ရထားနဲ့ bus ကားတွေကို ဗုံးခွဲပြီး အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ 7/7 မျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ (အဆိပ်ငွေ့တွေ ပက်ဖျန်းပြီး သူတို့ပြည်သူတွေ ရောဂါရအောင် လုပ်တဲ့ အကြောင်း နောက်မှာ ပြောပြပါဦးမယ်) ထို့အတူပဲ မြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးတွေမှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေလို ဘိန်းနဲ့ ဆေးခြောက်တွေကို လူမြင်ကွင်းမှာ ရောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုး ဒီနေ့အထိ မရှိခဲ့ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ Yakuza , နဲ့ Mafia လို လူဆိုးအဖွဲ့တွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ နာမည်ကောင်းထွက်တဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံမှာတောင် လစဉ် လူမြင်ကွမ်းမှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီမိုသမားတွေက နအဖရဲ့နူကလီးယားလုပ်ငန်းမှာ စစ်သားတချို့ကို ဓါတ်ရောင်ချည်သင့်တာကို စကားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေသေးတယ်။ အမေရိကန် နူကီရီးယား စမ်းသပ်ဖေါက်ခွဲတဲ့အချိန်မှာ သူ့စစ်သားတွေကို တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့အတူတူ ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်အောင် လုပ်ပြီးအသေခိုင်းခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ကျတော့ မသိဘူးမဟုတ်လား? ဘယ်သိမလဲ ဒီမိုမီဒီယာတွေက သတင်းအမှောင်ချထားတာကိုး။
အဲဒါတွေကို ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ မထင်ဘူး မဟုတ်လား? ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဒီမိုမီဒီယာတွေရဲ့ Mind control အောက်မှာ လုံးဝရောက်နေတော့ ဒီမိုအစိုးရလူသတ်မှုတွေကို လေးလေးနက်နက် တွေးဖို့ အင်မတန်ကို ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ သတိထားမိရဲ့လား? လူတွေကတော့ စံနစ်တိုင်းမှာ အားနည်းချက်ကိုယ်စီ ရှိကျတယ်လို့ ပီးသလွယ်ပြောကျပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ စံနစ်နဲ့ အရင်းရှင်စံနစ် အားနည်းချက်တွေက ဘာလဲလို့ မေးရင် သူတို့ ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်း မသိကျပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်ရတာကလဲ ဒီမိုသတင်းစာတွေက အရင်းရှင်ကြီးတွေ အလှူအတန်းလုပ်တာတွေ၊ လူမှုရေးလုပ်တဲ့ သတင်းတွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေက အရင်းရှင်တွေကို လုပ်ခတိုးတောင်းတဲ့ သတင်းတွေပဲ ဖတ်ရတယ် မဟုတ်လား။ အခုဆိုရင် ခင်ဗျားတို့က အရင်းရှင်ကြီးတွေကို သူတော်စင်ကြီးတွေလို့တောင် ထင်နေကျတယ် မဟုတ်လား? အဲဒါတွေဟာ ဒီမိုမီဒီယာတွေရဲ့ Mind control အောင်မြင်မှုကို သက်သေပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ (Mind control နှင့် Brain wash သည် အတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်)။
တချို့က အမေရိကန်နဲ့ uk အစိုးရ လူသတ်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး ဖင်ပိတ်ငြင်းကျတယ်။သတိထားဖို့က အဲဒီနိုင်ငံတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကျင့်သုံးပြီး ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ် ဒုက္ခပေးနေကျတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့် အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေကို သတ်ချင်တိုင်း သတ်ခွင့်ရှိလဲဆိုတာ စဉ်းစားသင့်တာပေါ့ ။ မဟုတ်ဘူးလား? နောက်ပြီး မြန်မာ ဒီမိုနိုင်ငံရေးသမားတွေ အားလုံးဟာ အမေရိကန်အစိုးရ ပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးငွေကို လစဉ် အလကား ရနေတယ်ထင်သလား? ဘယ်သူမှ ငွေကို အလကားမပေးဘူး။ သူတို့ခိုင်းတာ လုပ်လို့ ၊ သူတို့ရဲ့ သြဇာခံဖြစ်လို့ ဒီမိုသမားတွေကို ပိုက်ဆံပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလူတွေ ဒီမိုကရေစီရလို့ အစိုးရဖြစ်လာရင် သူတို့ဟာ အမေရိကန်နဲ့ uk အစိုးက လိုသလိုကြိုးဆွဲမယ်ဆိုတာ သတိထားပါ။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုနိုင်ငံကြီးတွေ သတ်ဖြတ်တာကို မျက်ကွယ်ပြုသင့်တယ် ထင်ပါသလဲ?
ဒါကြောင့် ရှေ့ဘုန်းကြီးတစ်ချက်ခေါက်လို့ ကမူရှုးထိုးလုပ်ရင်း နောက်ဘုန်းကြီးက နှစ်ချက်ခေါက်တဲ့ အဖြစ်မျိုးရောက်ရင် ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်ဟာ သမိုင်းရဲ့ တရားခံ အစစ်တွေဖြစ်ကုန်ပါမယ်။ ဒီမိုကရေစီ တကယ်မရှိဘူးဆိုရင် မရှိဘူးဆိုတာ ရဲရဲ လက်ခံပြီး ဘာလုပ်သင့်လဲ စဉ်းစားရပါမယ်။ ဒါမှ မဟုတ် အားနည်းချက်တွေကို လေ့လာပြီး စဉ်းစားအဖြေရှာ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့မကျဘူးလား?
Posted by * In Search of Truth * at 1:48 AM
Wow! You are Unbelievable. I never, never, ever seen suchadumb, dumb person in my entire life. I can not believe that you live inawestern country. It isashame to say you areagrown up man, because your wisdom is outdated, old, rotten, dirty and nasty and worth absolutely nothing!
It is actually fun to read your posts though, because I can never find the dumbest posts anywhere on the world wide web. I laugh my head off as I read along, and I ask myself "do you really think that's right? I am your new big fan. so keep rock on! lol
မင်းတို့ တောသားနှစ်ယောက်လဲ လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီး နအဖကိုဘဲ ကာကွယ်နေတာပါလား။ ကျနော်က လောလောဆယ် ကိုးရီးယားမှာပါ။ ကိုးရီးယားက ဥပဒေအရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံထက် အဆတစ်ရာသာပါတယ်။ ကျနော်နေတာကြာပြီ လဘက်ရည်ဖိုးပေးရတဲ့လူ တစ်ခါမှ မကြားဘူး မသိဘူးသေးဘူး။ ကျနော်တို့ဆီကရော ပြည်သူဆီကပါ ဆယ်ပြားပိုတဲ့ ပိုက်ဆံတောင်းတာလဲ မတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။ ရဲကလဲ ရဲအလုပ်လုပ်။ စစ်တပ်ကလဲ စစ်တပ်အလုပ်လုပ်။ စစ်တပ်ဆို မြို့ထဲမျာ သေနတ်ကားယားနဲ့ မမြင်ဘူးပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက လူကြီးဆိုသူတွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရပါဘူး။ ဒါက ဒီမိုကရေစီဖြစ်လို့ဘဲ။ လွပ်လပ်စွာ မိမိဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိတယ်။ လုပ်အားပေး ပေါ်တာဆွဲ သူများပစ္စည်းခိုး ဟိုဟာခိုင်း သည်ဟာခိုင်း ဘာတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။ အဲဒါ ဒီမိုကရေစီဖြစ်လို့ဘဲ။ အလွန်အေးချမ်းပါတယ်။ နိုင်ငံသားတိုင်း မှတ်ပုံတင်ရှိတယ်။ မလုပ်ပေးလို့ မရဘူး။ ပိုက်ဆံတောင်းလို့လဲ မရဘူး။ တောင်းတဲ့သူ အဲဒီမျာတင် ရာထူးပြုတ်ပြီးသားမှတ်။ ဒါတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တောင်းတနေတဲ့ အရာတွေပါ။ နိုင်ငံဆင်းရဲပါစေ။ ကိစ္စမရှိဘူး။ အခြေခံလူ့အခ၊ွင့်အရေးနဲ့ တရားဥပဒေရှိယင် တော်ပါပြီ။ ဒီမှာက ဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့လူတိုင်း တူညီတဲ့ဥပဒေအခွင့်အရေးရှိတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ သူ့တို့က အမျိုးကို အရမ်းချစ်တယ်။ မိမိလူမျိုးကသာ အဆဆ အရာရာ အခွင့်အရေး ပိုပေးတယ်။ လစာကအစပေါ့။ နအဖအုပ်ချုပ်တဲ့ ကာလတစ်လျောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ ဖက်ရွက်လိုပါဘဲ။ ဆူးပေါ်ကျလဲ ခံရ။ ဆူးအောက်နေလဲ ခံရဘဲ။ ကိုယ့်လူမျိုးကို ပစ်ထားတဲ့ ဂရုမစိုက်တဲ့ အစိုးရထဲမှာ မြန်မာအစိုးရက အဆိုးဆုံးဘဲ။ အတ္တသမားတွေ ကြီးစိုးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။ ကြောက်စရာ သံဝေဂယူစရာ ကောင်းပါတယ်။ တောသားတို့ရေ နအဖအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မတရားမှု ခြစားမှုတွေကိုလဲ ဖေါ်ပြပေးပါ။ အခုတော့ မင်းတို့က နအဖကို ဝေဘန်သလိုလိုနဲ့ နအဖကို ကာကွယ်နေတာပဲ။ ဒီမိုကရေစီကိုလဲ အသရေကျအောင် ပြောနေတာ မကောင်းပါဘူး။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီးက လူ့အခွင့်အရေးလဲ ရသင့်သလောက်ရတယ်။ မတရားလုပ်ရင် ရုံးသွားလို့ရတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံကတော့ မရပါဘူး။ ကျနော်တို့ တောရွာက မြေတွေကို စစ်တပ်က အတင်းသိမ်း ပိုင်ရှင်င်္တေအပါအ၀င် လူတွေကို အတင်းခိုင်း ခိုင်းမရလျှင် ပုဒ်မအမျိုးမျိုးတပ်။ ဒါတွေမရှိယင် နိုင်ငံဟာ အေးချမ်းနေမှာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ နအဖသက်တမ်းတစ်လျောက် လူတွေကိုပဲ ဒုက္ခပေးနေတာပါ။ မင်းတို့လဲ လေ့လာပါအုံး။ နအဖကို ကာကွယ်ရင်း မပြောသင့်တာ မပြောကြပါနဲ့။ မင်းတို့လဲ နအဖရဲ့ ဘရိန်းဝေါ့ရှ် ခံရတဲ့လူတွေပါဘဲ။
လက်စသတ်တော့ ဘလော့တွေမှာ ယူအက်စ်နဲ့ ယူကေ မကောင်းကြောင်း အားအားတိုင်း လိုက်ရေးနေတာ ဒင်းတို့ကိုး။ ပေါ်တင် နာမည်နဲ့ မရေးနိုင်ဘဲ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် နာမည်နဲ့ ရေးရေးနေရတဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘောပေါက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ဟေ့.. မင်းတို့လို ဘလော့မျိုး ဘယ်လောက်ပဲ နာမည်ကြီးအောင်လုပ်လုပ် ဘယ်သူမှ မဖတ်ဘူးကွ။ ဒီမှာ.. မင်းတို့လို သင်းကွဲတွေအတွက် ငါတို့မှာ နေရာမရှိဘူး။ မစားရတဲ့ အမဲ သဲနဲ့ ပက်ဖို့လဲ ကြိုးပမ်းမနေနဲ့။ နေရာလိုချင်ရင် နအဖနဲ့ သွားပေါင်း။
ဂူဂယ်လ်ရဲ့ ဟာ့ဒစ်နေရာတွေ မင်းတို့ကြောင့် အလဟဿ ဆုံးရှုံးနေရတယ်။ ထွီ
ကိုတောသား နှစ်ယောက်ခင်ဗျ ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ. ပိုစ့်ကိုစောင့်ဖတ်နေတာဗျာ။ ဖတ်တဲ့လူမရှိဘူးလို့သာပြောသွားတယ် ကွန်မန့်က ၃ခုရှိသွားပြီ ဒီမို ဟုမဆိုလို နအဖ ဟုမဆိုလိုပါ ဝေဖန်သင့်သောသူကိုဝေဖန်တဲ့ တောသားနှစ်ယောက်ကို အမြဲအားပေးနေပါတယ်။ ဝေဖန်ပြီး အကြံပေးတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်လေးကို သဘောကျတယ်ဗျာ။ ဝေဖန်ရုံသက်သက် ကတော့ ကျွန်တော်လဲ လုပ်တတ်ပါတယ် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုမရှာ နိုင်လို့ မရေးတာပါ။ ပြည်သူတွေ အသိဥာဏ်ရအောင် များများလုပ်ပေးဗျာ။ မဟုတ်ရင်တော့ ဒီမိုတွေက အသံကောင်းဟစ်နေလိမ့်မယ်ဗျ။
ကိုတောသားနှစ်ယောက်ကို အားပေးနေပါတယ် ဗျာ...။ ဒီမိုသမားတွေက တကယ်တမ်းကျတော့ ဦးနှောက်ကို ပိတ်ထားတဲ့ အကောင်တွေပါ..။ခွေးလေးဟောင်လို့ တောင်မရွေ့ပါဘူး
သူ့ဘလော့ခ်မှာ အရေးမခံလို့ ဒီမှာ ၀င်လာရေးတာပါဗျာ ... ဘယ်လိုမှ သဘောမထာပါနဲ့နော်..
Who is Zawmyoe? look at this.
He is the one who holds the extream wrong view against the Buddha's teachings. Buddha never taught us to kill and to torture the people. But Zawmyoe agrees with wrong idea. It is extreamly wrong and against from the Buddha's point of views.
19 Aug 08, 08:06
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: နေပါဦး ဦးသန်းရွှေနှုတ်ထွက်သင့်တယ်ထင်သလို ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်ရော နှုတ်ထွက်သင့်တယ်မထင်ဘူးလား? နှစ်၂၀ အထိ ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်နိုင်တဲ့ လူဟာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သင့်သလား?
19 Aug 08, 08:07
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ခင်ဗျားထောက်ခံနေတဲ့ နအဖရဲ့စံနစ်ဟာ လူတွေကို ဘယ်လောက်သတ်ဖြတ်လဲဆိုတာ လေ့လာဖို့က ခင်ဗျားအလုပ်
19 Aug 08, 08:08
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: နအဖ သတ်တဲ့စာရင်းက သိပ်သေးလွန်းပါတယ်ဗျာ။ ဒီမိုကရေစီသတ်တာက မှ အားပါးတရရှိတယ်။ ဗုံးနဲ့ကိုထောင်ခွဲတာဗျ
19 Aug 08, 08:09
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: စက်တင်ဘာမှာ သတ်တာ လူလေးတစ်၇ာပဲရှိတယ်ဗျာ။ ဘယ်လောက်အဖြစ်မရှိတဲ့အစိုးရလဲ.. ကြည့်စမ်းပါဦး
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: သန်းရွှေလဲအတူတူပဲ နှစ်၂၀ အထိ ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်နိုင်တဲ့ လူဟာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သင့်သလား? တိုင်းပြည်တိုးတက်နေတာ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာထဲမှာပဲ ရှိတာပါ မောင်ဇော်မျိုး
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဦးသန်းရွှေတစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူး.. ဦးမောင်အေးပါထွက်သင့်တယ်.. နှစ်ယောက်စလုံးအသုံးမကျဘူး.. မင်းတို့ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်နဲ့ ဘာမှ မကွာဘူး
19 Aug 08, 08:10
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: နာဂစ်မှာ ဘုရားပေါ် ဖိနပ်စီးတဲ့ အတွင်းရေးမှုးဆိုတဲ့ကောင်လဲ ထွက်သင့်တယ်..
ကဲ.. မင်းတို့ ဒီမိုဘက်က ဘယ်ကောင်တွေ ထွက်သင့်တယ်ထင်လဲ? ပြောပြပါဦး
19 Aug 08, 08:11
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: လူသတ်ပြီးတိုင်းပြည်ချမ်းသာ တိုးတက်နေတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး အေး လူသတ်ပြီး ကိုယ့်လူမျိုးဒုက္ခပင်လယ်ဝေတာက အဆိုးဆုံးပါ မောင်ဇော်မျိုး ရှူ့လော့ > http://komoethee.blogspot.com/2008/08/blog-post_5436.html
19 Aug 08, 08:12
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဟားဟား.. ဒါဆိုလဲ နအဖ လူသတ်တာ မင်းဘာအတွက် နားပူအောင်လျှောက်ပြောနေသေးလဲ?
မိုးသီးဇွန်ဘလော့ဖတ်ကတည်းက ဥာဏ်ရည်ကို ခန့်မှန်းလို့ရပါပြီဗျာ ... ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ဒါဆို မင်းကဘာလို့များ ဒီကောင်တွေဘက်ကရပ်တည်နေလဲ ဟားဟားဟားဟားဟား
19 Aug 08, 08:13
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ပေါက်ကရသတင်းမှန်သမျှ အကုန်တင်တဲ့ မိုးသီးဇွန်ကို အားပေးနေတာကိုး
ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဆိုးကြီးကို မလာအောင် တားဆီးပေးတဲ့ကျေးဇူးနည်းသလား? မင်းညအိပ်တိုင်း ဦးချပြီးမှ အိပ်နော်
19 Aug 08, 08:14
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: မင်းက ဆိတ်လစိလို ဟိုဘက်ကပ် ဒီဘက်ကပ်တဲ့ ကောင်မျိုးပဲကွ
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မင်းက ဦးဏှောက်မရှိတော့ မိုးသီးဇွန်လိုငကြောင်ပြေသမျှယုံနေတာကိုး
ဟဲဟဲ စက်တင်ဘာတုံးကလဲ ကားတိုက်တဲ့ပုံကြီးတင်ပြီး ဒီမိုငတုံးတွေကို ရင်ခုံအောင်လိုက်သေးတယ်.. အဲလောက်တုံးတဲ့ ငတုံးတွေကို ထိမ်းထားတဲ့ မိုးသီးဇွန်ပဲ
19 Aug 08, 08:15
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: မနက်ဖြန် ဒီမိုကရေစီ ရကြည့် မောင်ဇော်မျိုးက ဒေါ်ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်ကို ထိပ်ဆုံးကထောက်ခံမဲ့လူ
19 Aug 08, 08:16
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မင်းတို့ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်က ငတုံးပဲ.. အသက်၄၀ အထိ အလုပ်မလုပ်ဖူးတဲ့ ငပျင်းမ.. သူ့ကိုဘာအတွက်ထောက်ခံရမှာတုံး
ငတုံးတွေကို ဦးဆောင်နိုင်တာ ငတုံးမကြီးပဲ ဖြစ်မှာပေါ့ ...
19 Aug 08, 08:17
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ဆိတ်လစိလို မောင်ဇော်မျိုး ကနေဒါမှာ လူတောရော တိုးရဲ့လား? အရိုက်ခံနေရအုံးမယ် စောက်ချိုးမပြေတာနဲ့ သတိထား မင်းက ပညာဘယ်လောက်တက်လို့လဲ?
19 Aug 08, 08:18
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဒီမိုငတုံးပီပီ အကြမ်းဖက်စကားတွေပြောလာပီ.. မင်းတို့ဒီမိုငတုံးတွေ အဲဒါကြောင့်လူမွှေးမပြောင်တာ.မင်းတို့ ခေါင်းဆောင် 109/110 ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်ထက်တော့သာပါတယ်ကွာ... အသက်၄၀ အထိ အလုပ်မလုပ်ဖူးပဲ ငတုံးတွေမဲပေးလို့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတာ... ဟားဟား စိုင်ကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်တာ,.ဒေါ်ကော်ပီစုကြည် ဒီမိုကရေစီ ကြိုက်တာလဲအပြစ်မတင်သင့်ပါဘူး... ဘာမှအရည်အချင်းမရှိပဲ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းရှိတာပဲ
19 Aug 08, 08:21
မောင်ကျောင်းသား: အော် ကိုကြီးဝိုင်းရေ ကျနော်သိပြီဗျ။ ဇော်မျိုးဆိုတာ အစွဲအလမ်းအလွန်ကြီးတဲ့ ဖေါက်ပြန်ရေးသမားတစ်ယောက်ဘဲ။ သူများနိုင်ငံဖြစ်တာ ကျနော်တို့နိုင်ငံနဲ့ ဘာဆိုင်လို့ သွားဝေဘန်ရမှာလဲ။ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြည်သူတွေ သံဃာတော်တွေကို သတ်ပြီး ကျေးဇူးကန်းတဲ့လူတွေကိုဘဲ ကျနော်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်ခင်ဗျာ။သူတို့ မဟုတ်တာလုပ်တာကို ကျနော်တို့ ဝေဘန်တားမြစ်ပြောဆိုရတယ်။
19 Aug 08, 08:22
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဒါဆိုလဲ မင်းတို့က သူများနိုင်ငံကြည့်ပြီး ဒီမိုကရေစီယူချင်နေတဲ့ စိတ်ထားတွေ အရင်ပြင်ပေါ့ကွာ.. မဟုတ်ဘူးလား? အင်း မဖြစ်စလောက်လေးသတ်မိတဲ့ နအဖကို မင်းတို့ အတင်းပြောလို့ကို မဆုံးနိုင်တော့ဘူး... ဒီမိုကရေစီစံနစ်မဟုတ်တော့ နအဖ သတ်ချင်တိုင်း သတ်ခွင့်မရရှာဘူးနော်
19 Aug 08, 08:24
မောင်ကျောင်းသား: သံဃာတော်ဆိုတာ မကောင်းမှုဒုစိုက်လုပ်နေသူကို တားမြစ် ပြောဆို ဆုံးမရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ မူလတန်းကျောင်းသားလေးတောင် နားလည်တယ်ခင်ဗျ။ အတ္တသမားတွေကတော့ ဘယ်တော့ ဘယ်တော့မှ နားလည်နိုင်မယ်မထင်ဘူးခင်ဗျ။
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: သံဃာတော်အစစ်တွေဟာ လူယုတ်မာ ဒီမိုသမားတွေ အာဏာရရေးလုပ်မှာ မဟုတ်ပါ။
19 Aug 08, 08:25
မောင်ကျောင်းသား: လူသတ်တာဟာ လူသတ်တာပါ။ ဘာမှ ကာကွယ်စရာ မလိုဘူး။ ကိုဇော်မျိုးရဲ့ မိဘ မောင်နှမ တစ်ဦးဦးကို သူများကသတ်ရင် ကိုဇော်မျိူးကို ၀မ်းသာမှာလား။
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဒီမိုမီဒီယာတွေနားထောင်ပြီး အလိမ်ခံရတဲ့ သံဃာတွေသာ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေ အသုံးချတာ ခံကျတာပါ .မင်းကိုမင်းအဲဒီမေးခွန်းပြန်မေးပါ.. အမေရိကန်မှာ သေသွားတဲ့သူ တစ်သောင်းရဲ့ ဆွေမျိုးတွေနေရာကနေ ပြန်ခံစားကြည့်ပေါ့
19 Aug 08, 08:26
မောင်ကျောင်းသား: အော်- တိပိဋကဆရာတော်တွေ တကယ့်စာတတ် အကျော်တွေ ပြီးတော့ ဆရာတော်ဦးညာဏိဿရတို့လို ဆရာတော်တွေကိုလဲ မင်းက လူယုတ်မာလို့ ပြောချင်တယ်ပေါ့။
19 Aug 08, 08:27
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: တိပိဋကဆရာတော်လားဘာလား မသိဘူး.. သေခြာတာကတော့ သူတို့တွေ နိုင်ငံရေးအကြောင်းဘာမှ မသိဘူး.. အလိမ်ခံ၇တာကတော့ သေခြာတယ်
မောင်ကျောင်းသား: အမေရိကန်ကသေတာ ကျနော်တို့နိုင်ငံနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့လူ မသေဘို့က အရေြး့ကီးတယ်။ သူတို့ယုတ်မာ ရက်စက်တာ ကျနော်တို့နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကျနော်တို့ပိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဘဲ ပြောမ
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: မင်းတို့ဒီမိုကောင်တွေ ၈၈တုံးက ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဘယ်လိုဝေဖန်ခဲ့လဲ? ဘယ်လိုအပြစ်တင်ခဲ့လဲ? မိဘတွေကိုမေးကြည့်ပါဦးဗျာ. မင်းမှာ လူစိတ်မရှိဘူးဆိုတာ သိသာတယ်.. အမေရိကန်လဲ လူပဲ.. မင်းမှာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့ ဒီမိုငတုံးစစ်စစ်ပဲ
19 Aug 08, 08:28
မောင်ကျောင်းသား: အော်- ခင်ဗျားကို ကိုဇော်မျိုးလို့ မခေါ်တော့ဘူး။ မိစ္ဆာဒိဌိလို့ ခေါ်တော့မယ်။
အမေရိကန်ဖြစ်တာနဲ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာလား မိစ်ဆာရယ်။
19 Aug 08, 08:30
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဒါဆိုလဲ မင်းတို့က ဒီမိုကရေစီဘာအတွက်လိုချင်တာတုံး? ရှင်းစမ်း .. လင်းစမ်းပါဦး
မောင်ကျောင်းသား: ဒီမိုကရေစီဆိုတာ စစ်စစ်တော့ ပါဠိကလာတယ်လို့ ဆရာပြောဘူးတယ်။ ဓမ္မ+ကရ+စီ ပေါ့။ တရားသဖြင့် ပြုမူ နေထိုင် ပြောဆို ကျင့်သုံးတာကို ပြောတာ။
19 Aug 08, 08:31
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဟားဟား.. မိုက်တယ်ကွာ... ပလိဆိုပဲ.. ဟားဟား.. ဟုတ်ပါ့.. စကားလုံးလှလှလေးကြောင့် လိုချင်တာကိုး
မောင်ကျောင်းသား: အဲဒါ လူတိုင်းရှိသင့် လိုက်နာသင့်တဲ့ အရာဘဲ။ အဲဒါတွေကို လူတွေနားတွေနားလည်အောင် အထူးသဖြင့် အုပ်ချုပ်သူ လူရမ်းကားတွေ နားလည်အောင်ပြောရမယ် ရေးရမယ်။ ဒါမှ လူပီသတယ်။
19 Aug 08, 08:32
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဇော်မျိုးကရေစီစံနစ်သစ်ကိုတီထွင်ထားတယ်.. အဲဒီစံနစ်မှာ လူတွေဟာ အလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူး။ ကားတစ်စီးအိမ်တစ်လုံးစီပေးထားမယ်။ လူတိုင်းဟာ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်
မောင်ကျောင်းသား: ဘယ်က ပလိ ဖြစ်ရမှာလဲ။ ပါဠိ ပါဗျ။
19 Aug 08, 08:33
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ကဲကဲ ဒီမိုကရေစီမှာ အလုပ်လုပ်နေရသေးတယ်.. ဇော်မျိုးလုပ်ထားတဲ့ စံနစ်သစ်မှာ ဘာမှအလုပ်လုပ်ဖို့ မလိုဘူးဗျ, စိတ်ဝင်စားလား? အဲဒီစံနစ်သစ်ကလေးက ပိုမကောင်းဘူးလား? လက်တွေ့တော့မမေးနဲ့ဗျ.. ဆိုရှယ်လစ်၊ ဒီမိုကရေစီတို့လိုပဲ အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးပေါ့
19 Aug 08, 08:34
မောင်ကျောင်းသား: တိုက်တွေ ကားတွေက ဘယ်သူမဆို ရအောင်လုပ်ရင် ရနိုင်တယ်။ ဘုရားက နည်းပေးထားပြီးသား။ အဲဒါက အဓိကမဟုတ်ဘူး။ အဓိကက မှန်တာ ပြော လုပ်ဘို့ဘဲလိုတယ်။ ပြီးတော့ တရားမျှတမှုပေါ့။ ကိုယ်က စိမ်ခံပြီး သူများကိုကျတော့ အငတ်ထား
19 Aug 08, 08:35
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဒီမိုနိုင်ငံတွေမှာ လမ်းဘေးသူတောင်းစားတွေဖူးတယ် မဟုတ်လား? ကျွန်တော်တို့ တီထွင်ထားတဲ့စံနစ်မှာ အဲဒါမျိုးလုံးဝမရှိစေရဘူး. အိမ်ပေါင်ပြီး ဆေးကုသရတဲ့ဘ၀မျိုးလဲ မရှိစေရဘူး... ဘဏ်ကိုအတိုးပေးပြီး အိမ်ဝယ်စရာလဲ မလိုဘူး. ဘယ်လိုလဲ.. ကျွန်တော်တီထွင်ထားတဲ့စံနစ်သစ်က ပိုမကောင်းဘူးလား?
19 Aug 08, 08:36
မောင်ကျောင်းသား: ကိုမိစ္ဆာက တယ်အမြင်ဖေါက်ပြန်သကိုး။ လူမိုက်နဲ့ပေါင်းရင် လူမိုက်အမြင်ဘဲရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ဘကကျောင်းက စိတ်ကောင်းရှိဘို့နဲ့ တရားမျှတဘို့ဘဲ ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် ဘဘုန်းနဲ့ ကျနော်တို့ လရောင်အောက်မှာ အတူနေရတယ်။
19 Aug 08, 08:37
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: မင်းက ဒီမိုကရေစီကို စကားလုံးလှလို့ လိုချင်တယ်ဆိုလို့ ငါက ပိုမိုလှပတဲ့ စံနစ်လေးကို စေတနာနဲ့ တီထွင်ပေးလိုက်တာပါကွာ. ဒေါသကလဲ တယ်ကြီးသကိုး
မောင်ကျောင်းသား: စားလဲ အတူတူဘဲ။ ဟို လူကြီးတွေလို ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးပါပြောပြီး နိုင်ငံခြားဖြစ်အကောင်းစားတွေ မသုံးဘူး။ တရားမျှတဘို့ လူသားဆန်ဘို့ဘဲ ပြောပြတေယ်။
19 Aug 08, 08:39
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ကဲကဲ မောင်ကျောင်းသား စကားအပိုတွေ မပြောနဲ့ ဒီမိုကရေစီလို လူတွေကို အဆိပ်ငွေ့ဖြန်းပြီးသတ်ဖြတ်တာမျိုးလည်း မလုပ်ဘူးနော်.. အခုစံနစ်သစ်လေးကို ပေးတုံးယူထား
မောင်ကျောင်းသား: ကျနော်ပြောတာရှင်းတယ်။ တိုက် ကား ဖုန်းက အဓိကမဟုတ်ဘူး။ တရားမျှတဘို့နဲ့ တရားသဖြင့် ပြောဆို လုပ်ကိုင်ဘို့က ဒီမိုကရေစီလို့ဘဲ ပြောတယ်။ ကိုမိစ္ဆာက တယ်ကောက်ကွေ့တာပဲဗျာ။
19 Aug 08, 08:40
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: စံနစ်သစ်မှာ တရားမျှတမှုအပြည့်ရှိပါတယ်။ ၀န်ကြီးတွေ၊ ဘာတွေ အားလုံးတန်းတူ တရားစီရင်မှာပါ.. လစာလည်းအတူတူပဲပေးထားမှာ..
မောင်ကျောင်းသား: ကိုမိစ္ဆာရဲ့ ဒီမိုကရေစီက လူယုတ်မာစိတ်တွေ ပေါက်ဖွားလာအောင် သက်သာခိုသမားတွေ အကျင့်ပျက်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဒီမိုဘဲ။ ဘုရားဟောနဲ့ သိပ်ပြီး ဆန့်ကျင်လွန်းတယ်။
19 Aug 08, 08:41
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ခက်ပါလားနော်.. အနောက်ဖက်က ဒီမိုကရေစီက ပဌိစကားလုံးတွေဖြစ်လို့ဖြစ်
အခုလည်း ဘုရားဟောတဲ့ လုပ်နေပြန်ပြီ.. ခက်ပါလား မောင်ကျောင်းသား
ကဲကဲ သွားတော့မယ်ဗျာ.. အားနာပါးနာနဲပ ဒို့အရေးလေးအော်ပေးပါဦးမယ်
ဆန္ဒပြသူ တစ်ရာသတ်တဲ့ နအဖ ဖြုတ်ချရေး .. ဒို့အရေး ဒို့အရေး
ဈေးရောင်း၊ ဈေးဝယ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူ တစ်သောင်း ကိုဗုံးခွဲသတ်ဖြတ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး . . .ဒို့အရေး.. ဒို့အရေး
19 Aug 08, 08:56
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ဇော်မျိုးကတော့ သွားပြီ လူဖြစ်ရှုံးလိုက်တာငါ့သားရယ်
ဇော်မျိုးလိုကောင်တွေ တို့မြန်မာပြည်လာပြီး လူလာဖြစ်ရတယ်လို့ကွာ
လူလိုပြောလဲ နားမလည် ဪ သူ့အမေတော့ ဒီကောင့်ကို တော်တော်မွေးရကျိုး နပ်လိုက်တာ
လူသတ်ပြီဆိုမတော့ နဲနဲ များများ ဘယ်ကောင်းတော့မလဲ မိစ္ဆာဒိဌိ ဇော်မျိုးရယ်
မင်းဆွေမျိုးတွေ နအဖသတ်မှ ကောင်းပါတယ် ထိုင်အော်နေ ကြားလား အရိုင်းအစိုင်း မိစ္ဆာဒိဌိ ဇော်မျိုးရယ်
19 Aug 08, 09:20
မောင်ကျောင်းသား: ကိုမိစ္ဆာက နအဖလူသတ်တာနည်းသေးတယ်ဆိုပြီး သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် နအဖကို မကောင်းမှုတွေ များများလုပ်အောင် တိုက်တွန်းတယ်။ လူမိုက်တွေလဲ တရားသော မတရားသော နားမလည်။မြှောက်ပင့်တိုင်း လုပ်သင့် မလုပ်သင့်မစဉ်းစား။ တိုင်းပြည်မပျက် ခံနိုင်ရိုးလားဗျာ။ ဘုရားက မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင် လို့ဘဲ ဟောတယ်။ သူများမကောင်းတာလုပ်လို့ လိုက်လုပ်ရမယ်လို့ မဟောပါဘူး။ ဆရာတော်တွေလဲ ဘုရားတရားကိုပဲ ဟောတာပါ။ ဘုရားတရားကို ခုတုံးလုပ်တာ တော်တော်ယုတ်မာတယ်။ ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကို ဟိုစပ်စပ် သည်စပ်စပ် ဖတ်ရုံနဲ့ လူတတ်ကြီးလုပ်တာတော့ မမိုက်ပါဘူး ကိုမိစ္ဆာရယ်။ဒါလဲ သာသနာဖျက်တာတစ်မျိုးဘဲလို့ ဘုန်းဘုန်းမိန့်ဘူးတ.ယ်။ ဘုရားဟောကို ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်ဆွဲတာ အဆိုးဆုံးလို့ ဆရာတော်တွေက မိန့်ဘူးတယ်။ ကျနော်က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ မူလတန်းအဆင့်သာသာပါ။ ဒါပေမဲ့ ညတိုင်း ဘုန်းဘုန်းတွေရဲ့ သြ၀ါဒကို ခံယူတယ်ဗျ။
မကောင်းမှုလုပ်တာ ရှက် ကြောက်မှုမရှိရင် ဗာလ(လူယုတ်မာ)ို့ မကြာခဏ မိန့်တတ်တယ်ဗျ။ ကျနော်ကတော့ ဘုရားဟောတဲ့ ဒီမိုကရေစီကို လိုချင်တာဗျ။ တိုက် ကား ဖုန်း စိမ်ခံပစ္စည်းတွေ မလိုချင်ဘူးဗျ။ ကိုယ့်အစွမ်းနဲ့တော့ ရအောင်
19 Aug 08, 09:27
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: မောင်ဇော်မျိုး နားထောင်နားထောင် မောင်ကျောင်းသားက ရွာကဦးဇင်းကြီးကျောင်းက graduate
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး:
19 Aug 08, 09:28
မောင်ကျောင်းသား: ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်မှာဗျ။ အချောင်းသမားတော့ မလုပ်နိုင်ဘူးဗျ။ သူများမျက်ခုံးပေါ် စင်္ကြံလျှောက်တာက လူမပိသတဲ့ လူ့တိရိစ္ဆာန်လို့ အင်္ဂုတ္တိုရ်မှာ ဟောတယ်လို့ ဘုန်းဘုန်းဆရာတွေ မိန့်ဘူးတယ်ဗျ။ ကျနော်က graduate မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဘုန်းဘုန်းတွေ အဆုံးအမ(အမှန်တော့ ဘုရားဟော)ကို ပြန်ပြောပြတာပါ။ သူများတွေ မဟုတ်တာလုပ်တိုင်း ကိုယ်က လိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ တော်တော်ဖေါက်ပြန်လွန်းတဲ့ အယူအဆဘဲဗျာ။ ဘုရားတရား ကိုတော့ မစော်ကားပါနဲ့ ကိုမိစ္ဆာရာ။ ကိုယ့်ခံယူချက်ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်သလို ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘုရားတရားကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်လိုရာကိုယ်ဆွဲတာကတော့ လွန်လွန်းအားကြီး စော်ကားလွန်းအားကြီးပါတယ်ဗျာ။
ဘုန်းဘုန်းတွေ အမြဲတန်းဆုံးမတာက (မကောင်းမှုရှော် ကောင်းမှုဆောင် စိတ်ကောင်းထား အဲဒါ ဘုရားတိုင်းမိန့်မှာထား) ဘဲ ဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ သူတို့က လောကအကြောင်းကို ပိုနားလည်တယ်ဗျ။ ဘယ်သူက လူညစ်လဲဆိုတာလဲ ပိုသိကြသဗျ။
19 Aug 08, 09:39
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင် ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား မိစ္ဆာဒိဌိ ဇော်မျိုး
19 Aug 08, 09:41
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ကိုကျောင်းသားကြီး 88 တုံးက တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းအောင် မေတ္တာရပ်ခံတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ပြစ်မှားတဲ့ ဒီမိုငတုံးတွေကိုလည်း ဆုံးမပါဦးဗျာ... မျှတရင်သင့်တော်မှာပေါ့ဗျာ
မောင်ကျောင်းသား: အဲဒါကြောင့် လူတွေ လူသားပီသအောင် အမျိုးမျိုးဟောတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကို အတ္တသမား မိစ္ဆာဝါဒီ ဖေါက်ပြန်ရေးသမားတွေက နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုပြီး ပုဒ်မအမျိုးမျိုးတပ်သဗျ။ ဘုန်းဘုန်းတွေကတော့ အပြုံးမပျက်ပါဘူး။
19 Aug 08, 09:42
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ချစ်ကောင်းသီချင်းတောင်ရှိသေး > သူများမျက်ခုံးမွေးများပေါ် စင်္ကြန်စလျှောက်ချင်သလားဟေ့ အန္တရယ်တွေ များလွန်းတယ်
19 Aug 08, 09:43
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ကြက်ခတ်ဝိုင်းဆရာတော်ကြီးကို ပြစ်မှားတဲ့ ဒီမိုသူတောင်းစားတွေကိုလည်းဆုံးပါဦး
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: မိစ္ဆာဒိဌိ ပြန်လာပြီဟ
မောင်ကျောင်းသား: အကုန်ပါပြီးသားဗျာ။ သူတို့လဲ မဟုတ်တာလုပ်ရင် ယုတ်မာတဲ့အထဲပါသွားတာပေါ့။ ဘုရားတရားကတော့ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး အတန်းအစားမရွေးတဲ့ တရားတော်တွေပါ။ လိုက်နာတတ်ဘို့ဘဲ လိုပါတယ်။
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဒီမိုကရေစီတော့လက်ရှောင်တယ်ထင်တယ်
19 Aug 08, 09:44
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: လူသတ်ဖို့မိန့်ကြားတာ ဆရာတော်လို့ သတ်မှတ်လို့မရဘူးကိုယ့်လူ
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ကိုဇော်မျိုးက ကြက်ခတ်ဝိုင်းဆရာတော်ကြီးမိန့်ကြားတာကို လက်ခံတယ်ပေါ့လေ
19 Aug 08, 09:46
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: အဲဒါဆရာတော်ကြီးဟောတာ ဟုတ်ရဲ့လား..
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မသေချာပဲ ဘာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးပို ပုတ်ခတ်ကျသလဲ?
19 Aug 08, 09:47
မောင်ကျောင်းသား: ဘုန်းကြီးလဲ မဟုတ်တာလုပ်ရင် မကောင်းကျိုးရမှာပါဗျာ။ ကျနော်တို့ ဘုန်းဘုန်းတွေက ဘုရားတရားကိုဘဲ ဟောကြတာပါ။ ဘုရားတရားမလေ့လာဘူးတော့ နိုင်ငံရေးတရားလို့ ကောက်ကျစ်စဥင်္းလဲစွာနဲ့ ပုဒ်မတပ်တော့တာဘဲ။ အသိညာဏ်တစ်ထွာလော
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: အဲဒီကောင်တွေ အဝေစိမလားပဲနေမလား?
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ပုတ်လို့ပေါ် ဟုတ်လို့ကြော်တာပေါ့ မောင်ဇော်မျိုးရဲ့
19 Aug 08, 09:48
မောင်ကျောင်းသား: က်ကယ်နဲ့ တယ်မိုက်ကြသကိုး။ သေချာလေ့လာပြီးမှ လုပ်သင့်တာပါ့။ သံသရာမှာ သနားစရာပါဘဲ။ ဥပမာဗျာ- မင်းကျင့်တရားဟောတာကို နိုင်ငံရေးဆိုပြိးလုပ်တော့ ဆရာတော်ကြိးဦးညာဏိဿရတောင် ရှောင်လိုက်ရသေး။
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မင်းတို့ငတုံးတွေဟုတ်မဟုတ် အရင်စုံစမ်း.. ပြီးမှအပြစ်တင်ပေါ့.. မင်းတို့ဒီမိုတွေက ငတုံးတွေ၊ အတုလုပ်တဲ့အနေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိတော်တယ်
19 Aug 08, 09:49
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ကိုဇော်မျိုးခေါင်းထဲမှာ ဦးနှောက်ရော မွေးကတည်းက ပါရဲ့လားဗျာ?
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဘာလဲ? ၈၈ တုံးက မေတ္တာရပ်ခံတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို အပြစ်မတင်လို့ အခုလိုပြောနေတာလား?
19 Aug 08, 09:50
မောင်ကျောင်းသား: မင်းကျင့်တရားက နေရာတော်တော်များများ ပိဋကတ်တော်မှာ ဟောထားတယ်ပြောတယ်။ ကောသလမင်းနှင့်စပ်ပြီး မင်းကောင်းဖြစ်ဘို့ ဟောထား၊ ဘယ်လိုမင်းဟာ မင်းဆိုးလို့ဟောထားတာ အများကြီးပါဗျာ။ ဘုရားကို နိုင်ငံရေးဟောတယ်ဆိုပြီး
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: စာရွက်လေးကိုင်ပြီး ပါးစပ်ကပြောတဲ့ ဘုန်းကြီးကို ပြစ်မှားတာကျတော့ မှန်သတဲ့.. ခဲကိုင်.. ဒုတ်ကိုင်ဘုန်းကြီးတွေကို အပြစ်ပြောတော့ ငရဲကြီးမယ်ဆိုပဲ
မောင်ကျောင်းသား: မဖမ်းပါဘူး။ ရှေးဆရာတော်တွေ အမြဲတန်းဟောတာပါဘဲ။ မဖမ်းပါဘူး။ မစွ၊ပ်စွဲပါဘူး။
19 Aug 08, 09:51
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: အဲဒီဟာဟောတာ အတုလုံးဝမဟုတ်တာ သေချာတယ် လဒရဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဘာမဆို ဖုန်းတွေနဲ့ record လုပ်လို့ရတယ် လဒရဲ့
ခိုးထုပ်ခိုးထည်နဲ့ မိတာတောင် မောင်ဇော်မျိုးရယ်
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဟေ့ကောင် အဲဒါဆရာတော်ကြီးစကားဟုတ်မဟုတ် မင်းတို့ဘယ်လိုစုံစမ်းလဲ? မင်းတို့အောက်တန်းစား ဒီမိုတွေ အတုလုပ်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား?
မင်းတို့ကောင်တွေ ဘယ်ကရလာမှန်းမသိတဲ့ ဘုန်းကြီးအလောင်းတောင် နအဖ သတ်တယ်ပြောပြီး သတင်းအတုလုပ်သေးတာပဲ
19 Aug 08, 09:53
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: စာရွက်လေးကိုင်ပြီး ပါးစပ်က လူသတ်ခိုင်းတဲ့ဟာ ကောင်းရဲ့လား မောင်ဇော်မျိုးရဲ့ ?
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မင်းတို့ ဒီမိုဘက်ကောင်တွေအသံအတုသွင်းပြီး ဖြန့်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား? အဲဒါအရင်ရှင်းပါ
မောင်ကျောင်းသား: ကိုမိစ္ဆာရေ- ခင်ဗျားရဲ့ ဆိုးယွားဖေါက်ပြန်တဲ့ အယူအဆတွေဟာ သစ်ငုတ်တိုကြီးလို အမြစ်တွယ်နေပါလားဗျ။ တော်ပြီး။ သစ်ငုတ်ကြိးကို စကားပြောတဲ့သူဟာ ကာလ ဒေသမကြည့်နဲ့ ငတုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ သတ္တ၀ါတစ်ခု ကံတစ်ခုပေါ့ခင်ဗ
19 Aug 08, 09:54
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: အဲဒါဆရာတော်ကြီးဆိုတာ ကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်ကိုယ့်လူ လူနှစ်ယောက်ရှိပြီ ကျွန်တော့ကို confirm လုပ်ပေးတာ
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မင်းတို့ဒီမိုတွေအသံတုသွင်းပြီး ဆရာတော်ကြီး အပုတ်ချတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား?
ဘယ်လို confirmလဲ .. သိပ်မကြောင်နဲ့.. အတိအကျပြောစမ်းပါ
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဒကာအရင်းတွေလဲ ပြောသေးတယ်.. ဘယ်သူမှလဲ တိုက်ရိုက်မေးတာ မဟုတ်ဘူး
19 Aug 08, 09:55
မောင်ကျောင်းသား: ကိုဝိုင်းရေ ခွေးကို ရန်မူ ရိုက်သောသူ ရိုက်သူလဲခွေး ခွေးလဲခွေးတဲ့။ ရှင်းမနေပါနဲ့တော့ဗျာ။ သူ့လမ်း သူသွားပါစေ။ တော်ကြာ ခင်ဗျားလဲ လူယုတ်မာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: အဲဒီကောင်တွေက လူလိမ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား?
19 Aug 08, 09:56
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: အဲဒါဆရာတော်ကြီးကို ကိုးကွယ်တဲ့ မြန်မာပြည်က လူတိုင်းကို သွားမေးကြည့်မောင်ဇော်မျိုး
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဟဟ.. မင်းကရောလူတိုင်းသွားမေးကြည့်လို့လား? မင်းဆိုတဲ့ကောင် အဝေစိသေချာပေါက်ပဲ
ဒကာအရင်းဆိုရင် ဆရာတော်ကြီးကို တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပြီးမေးမှာပဲ..မင်းတို့ ဒီမိုတွေ လိမ်ညာကောက်ကျစ်တာ တော်သင့်ပြီ
19 Aug 08, 09:57
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: မင်းဖင်စုတ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ် အတုလို့သွားပြောရင်
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: အေးမင်းတို့ကောင်တွေ ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိ ဒီမိုငတုံးတွေပဲ ဆရာတော်ကြီးကို အတိအကျမသိပဲ ပြစ်မှား..
19 Aug 08, 09:58
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ကိုးကွယ်တာသေချာရင် လူတိုင်းကို မေးပြီးပြီ ကြက်ခတ်ဝိုင်းဆရာတော်ကြီးမှ ကြက်ခတ်ဝိုင်းဆရာတော်ကြီးပါတဲ့ဗျာ မိစ္ဆာဒိဌိ ဇော်မျိုး
မောင်ကျောင်းသား: တော်ကြပါတော့ဗျာ။ ဆရာတော်ကြီးတွေကို မပြောကြပါနဲ့။ အကုသိုလ်ကြီးတယ်ဗျ။ သူတို့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ သီလ သမာဓိ ပညာဂုဏ်တွေက ကျနော်တို့လို ပါမွားတွေ အစိပ်တစ်ရာ တစ်စိပ်တော် မမီဘူးလို့ ဘုန်းဘုန်းတွေ ပြောဘူးတယ်။
19 Aug 08, 09:59
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ငါတို့ဘလော့မှာ မင်းတို့ ဒီမိုစောက်ကျင့်ယုတ်တွေ ဘုန်းကြီးကို ရုရှစစ်သားယောင်ဆောင်ပြီး ဆဲထားတာ လက်ပူးလက်ကျပ်မိလို့ မင်းတို့ ဒီမိုတွေ စောက်ရှက်ကွဲသေးတယ်
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ကြက်ခတ်ဝိုင်း မှ ကြက်ခတ်ဝိုင်း ကြက်ခတ်ဝိုင်း မှ ကြက်ခတ်ဝိုင်း ကြက်ခတ်ဝိုင်း မှ ကြက်ခတ်ဝိုင်း ကြက်ခတ်ဝိုင်း မှ ကြက်ခတ်ဝိုင်း ဟေ့
19 Aug 08, 10:00
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဟေ့ကောင်.. မင်းလဲ လူတိုင်းကိုမေးတာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ.. မင်းကို ဒီမိုဘလော့တွေက ပြောလို့ မင်းအဟုတ်မှတ်ပြီးလျှောက်ပြောနေတာပါ.. လာပြီးလိမ်ညာမနေနဲ့
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မင်းတို့လို ဒီမိုဘက်ကောင်တွေပြောရင် ခေါင်းမရှိပဲ ယုံတဲ့ကောင်တွေ ဆရာတော်ကြီးကို ပြစ်မှားတော့ ဆရာတော်ကြီး သိက္ခာကျဖို့နေနေသာသာ မင်းတို့ကောင်တွေပဲ အဝေစိကျမှာ
19 Aug 08, 10:01
မောင်ကျောင်းသား: ကျနော်တို့ ဘုန်းဘုန်းတွေကတော့ သံဃာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ရင်ငုံပြိးနေပါတဲံ။ ကိုယ်ပြစ်မှားမိရင် ကိုယ်ဘဲနာမှာတဲ့။ ကိုဝိုင်းရေ တော်ပါတော့။ တကယ်လို့ ဆရာတော်ကြီးက လုပ်ရိုးမှန်ရင် သူဘဲခံရမှာ။ အလကားနေ အကုသိုလ်မယူပါန
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ရုရှက ဆိတ်ဘိုတွေ မင်းလောက်ကြီး အစွန်းမရောက်ဘူး မောင်ဇော်မျိုး ။ မင်းက လုံးဝ မိစ္ဆာဒိဌိကောင်
မောင်ကျောင်းသား: အေး သံဃာတော်တွေကို မတရားစွပ်စွဲ ဖမ်းဆီး ထောင်ချ သတ်ဖြတ်သူတွေလဲ မကောင်းကျိုးပေးအုံးမှာဆိုတာလဲ မမေ့ကြပါနဲ့။
19 Aug 08, 10:03
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: မောင်ဇော်မျိုးက နအဖစောက်ကျင့်အတိုင်း ဖင်ပိတ်ပြီး ငြင်းတာပဲဟ ဟားဟားဟား
19 Aug 08, 10:04
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဟေ့ကောင်.. ဒီမိုငတုံး.. ဒီမှာဖတ်ကြည့် http://lightofmyanmar.blogspot.com/2007/10/blog-post_10.html မင်းတို့ဒီမိုဘယ်လောက် ယုတ်ညံ့လဲ တွေ့နိုင်တယ်
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: သံဃာတော်တွေကို မတရားစွပ်စွဲ ဖမ်းဆီး ထောင်ချ သတ်ဖြတ်သူနအဖကို ထောက်ခံအားပေးသော မိစ္ဆာဒိဌိကောင် ဇော်မျိုးအား ယမမင်းမှ အဝိစီတွင် စောင့်နေသည်။
မင်းရဲ့ လူမဖတ်တဲ့ အစုတ်ပလုပ် blog ကိုလာပြ၊မနေစမ်းပါနဲ့ကွာ ဟားဟားဟား
19 Aug 08, 10:06
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဟေ့ကောင် မင်းတို့ဒီမိုငတုံးတွေ ဘုန်းကြီးကို အဲလိုဆဲတာ မင်းတို့ဘယ်လိုပြောမလဲ?
မောင်ကျောင်းသား: ဒုစရိုက်က အကျဉ်းအားဖြင့် ဆယ်ပါးတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်မလုပ်သော်လဲ လုပ်တာကို အားပေးထောက်ခံ သဘောတူရင် ပြစ်မှုမြောက်တယ်လို့ ဆိုသဗျ။ အဲဒါလေး သတိထားကြပါ။ ကျနော်တို့ဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတော့ သာကီနွယ်ပြောတဲ့ သဘောထားကြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်ဘို့လိုတယ်။ ကိုဝိုင်းပြောတာလဲ ဟုတ်တာပဲ။ လူမဖတ်တဲ့ အစုတ်ပလုပ် ဘလော့ ဆိုတာလေ။
19 Aug 08, 10:08
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဟုတ်ပါ..မင်းက မိုးသီးဇွန်လိုဘလော့ပဲ ဖတ်တယ်.. ဟီးဟီး
ပေါက်ကရသတင်းဆိုအားလုံးတင်တဲ့ မိုးသီးဇွန်ကတော့ အဆင့်မြင့်လူဖတ်လည်းများပါတယ်.. ဒီမိုကရေစီလဲ ပီသပါတယ်.. ဘယ်သူ့ကိုမှ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်မပေးဘူး
19 Aug 08, 10:09
မောင်ကျောင်းသား: အဲဒီဘလော့ကို ဖတ်တော့ ဘုရားတရားတော်ကို စော်ကားတဲ့သဘော သက်ရောက်တယ်ဗျ။ ကာယကံရှင်ကတော့ သူဟာ ဘုရားတရားကို ပြစ်မှား စွပ်စွဲတယ်လို့ သိချင်မှ သိတယ်။ နားမလည်ဘဲနဲ့ လူတတ်ကြီးလုပ်ကြတာကိုး။
19 Aug 08, 10:10
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: အေးလေး မင်းတို့က ခဲကိုင်တဲ့ ဘုန်းကြီး၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ်ဘုန်းကြီးတွေအတွက်ပဲရှိနေတာကိုး.. အကျင့်သီလပြည့်စုံတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို မင်းတို့ ဂရုစိုက်တဲ့ကောင်တွေမှ မဟုတ်တာ
19 Aug 08, 10:11
မောင်ကျောင်းသား: မိုးသီးဇွန်ဘလော့ကိုလဲ မဖတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ ဒီမှာဝင်လာရင်း အမြင်မတော်တာလေး တွေ့လို့ ၀င်ပြောတဲ့သဘောပဲ။ မကောင်းမှုလုပ်ရတာ ပျော်တယ်ဆိုလဲ လုပ်ပေါ့ဗျ။ အဲဒါက human rights ဘဲလေ။
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဘာလဲ? brainwash လုပ်တဲ့ BBC သတင်းနဲ့ DVB ပဲ နားထောင်တယ်ပြောမလို့လား?
19 Aug 08, 10:12
မောင်ကျောင်းသား: ဟိုးဟိုး ကိုမိစ္ဆာ ကျနော့်စကားထဲမှာ ဘယ်ဆရာတော်ကိုမှ ပြစ်မှားတာ မပါဘူးနော်။ သေချာ ပြန်ဖတ်ပါဗျ။
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ဇော်မျိုးရာ မင်းက သူ့ blog ကိုမနာလိုတာအဆန်းလား သူ့မှာ တနေ့တနေ့ စာလာဖတ်တဲ့လူ အများကြီးကွ
19 Aug 08, 10:13
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မနာလိုပါဘူးဗျာ.. ဟီးဟီး.. ပေါက်ကရသတင်းတွေဘယ်လိုရလို့ ရမှန်းမသိပဲအများကြီး အရှက်မရှိတင်နိုင်တာ ဘယ်လောက်တော်လဲ
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဒီမိုငတုံးတွေကလဲ တုံးချက်ကတော့ ကမ်းကုံတယ်.. သတင်းတွေမှားမှန်းလဲ သိနေတာပဲ မဖတ်ဖဲ မနေနိုင်ဘူး..
မောင်ကျောင်းသား: ကိုမိစ္ဆာက အယူဖေါက်ပြန် ပျက်စီးသလောက် သူများကို အတင်းမတရားစွပ်စွဲတာလဲ တတ်သေးသကိုး။ ကိုယ့်အတတ် ကိုယ်စူးပေါ့။ အဓိကကတော့ ကိုယ်ကောင်းဘို့ဘဲလိုပါတယ်။
19 Aug 08, 10:14
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ မိစ္ဆာဒိဌိအလိုမရှိ
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဒီမိုငတုံးဆိုတဲ့ကောင်တွေကလဲ နအဖအတင်းရေးရင် အငမ်းမရကို ဖတ်ချင်တယ်မဟုတ်လား? အဲဒီတော့ ဟိုကလဲ အရှုးကောင်းကောင်းလုပ်တာပေါ့... ပေါက်ကရသတင်းတွေ.. အတင်းတွေတင်ပြီး ငပေါတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်တယ်
19 Aug 08, 10:15
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းဘယ်မှ မရွေ့ဘူး မိစ္ဆာဒိဌိ မောင်ဇော်မျိုးရဲ့
မောင်ကျောင်းသား: ကျနော်ကတော့ ဘယ်ဘုန်းကြီးက နအဖလူ။ ဘယ်ဘုန်းကြီးက အဖျက်သမားလို့ မမြင်ဘူးဗျ။ ဘုရားတရားဟောတဲ့ ဘုန်းကြီးအားလုံးကို ကြည်ညိုတယ်ဗျ။ ဘုန်းကြီးက ပါရာဇိကကျတာတောင် ကျနော်တို့လို လူတွေထက် ဂုဏ်ဆယ်ပါးသာသတဲ့။ ရှာဖတ်ကြ
19 Aug 08, 10:16
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မင်းလဲ မိုးသီးဇွန်ဘလော့လေးဖတ်၊ နှစ်ပြားမတန် BBC လေးကြည့် ၊ DVB နားထောင်ရင် ငတုံးဘ၀ကိုရောက်လာတယ်မဟုတ်လား?
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: မောင်ဇော်မျိုးအမြင်ကတော့ နအဖက ကောင်းတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား?
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: နအဖ က အင်မတန် ညှင်သာတဲ့ အစိုးရပါ..မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေကသာ မသိသာပါကွာ
19 Aug 08, 10:17
မောင်ကျောင်းသား: ဟော လုပ်ပြီ။
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ကမ္ဘာပေါ်မှာ စွမ်းအားရှင်သုံးပြီး ပွေ့ဖက်ပြီးကားပေါ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ နအဖတစ်ခုပဲရှိတယ်
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဒီမိုနိုင်ငံတွေလို ရိုက်တာတွေ မလုပ်ဘူးနော်..
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ဟားဟားဟားဟား >> နအဖ က အင်မတန် ညှင်သာတဲ့ အစိုးရပါ..
19 Aug 08, 10:18
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဘာလဲမင်းက ဒီမိုအစိုးရတွေလို ရိုက်နှက်စေချင်လို့လား?
မောင်ကျောင်းသား: ဒုစရိုက်ဆိုတာကိုတောင် မသိဘဲ ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ်လို့ ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဗျ။
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: တော်တော်လေး အမြင်မှားနေတဲ့လူပဲ ဟားဟားဟား
မောင်ကျောင်းသား: Whatapity creature!!!
19 Aug 08, 10:19
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဟုတ်ပါတယ်.. ကားပေါ်ပွေ့တင်သွားတာကိုပဲ အကြမ်းဖက်တယ်လို့ မြင်တဲ့လူတွေက အမြင်မှန်ပါတယ်
19 Aug 08, 10:20
မောင်ကျောင်းသား: ကျောင်းတိုက်တွေကို ဘယ်လိုဝင်စီးလဲဆိုတာကိုကော သိပါသလား။ ဆရာတော်တွေ အကုန်သိသဗျ။
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: နအဖ က အင်မတန် ညှင်သာတဲ့ အစိုးရပါ လူလေးတွေကို ဖမ်း။ အင်းစိန်ပို့ မဟုတ်တဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ တရားစွဲ နောက်ထောင်ချ ဟားဟားဟား
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: အီတလီမှာ ဆန္ဒပြသူတွေ အိပ်နေတုံး အတင်းဝင်ရိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ ညှင်သာတယ်လို့ မြင်ရမယ်မဟုတ်လား?
19 Aug 08, 10:21
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: တရားစွဲထောင်ချတာ တော်သေးတာပေါ့ကွာ... ဒီမိုနိုင်ငံအမေရိကန်မှာဆိုရင် ထောင်ထဲမှာ ဘာမှ ပြစ်မှုလဲ မစွဲဘူး.. အထဲမှာ ခွေးလိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတယ်
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မိသားစုနဲ့လဲ မတွေ့ရဘူး.. ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်မှန်းကို မသိပါဘူးကွာ
19 Aug 08, 10:22
မောင်ကျောင်းသား: ဘယ်သူမှ အီတလီကောင်းတယ်လို့ ပြောဘူးလို့လဲ မိစ္ဆာကြီးရဲ့။ တန်တော့ မိစ္ဆာကြီးဟာ ဘုရားခေတ်က မာရ်နတ်လို ကျနော်တို့စိတ်ဓာတ် ယိုယွင်းပျက်စီးအောင် လုပ်တာနဲ့တူတယ်။ တော်ပြိနဲ့။ လူမိုက်တော့ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ကျောင်းတိုက်တွေကို ကွန်မန်ဒိုတွေလို ဝင်စီးတာ ဟားဟားဟား တရုတ်ဘုန်းကြီးတွေလို ရှောင်လင်လေး ကွန်ဖူးလေးတတ်လို့ တော်သေး
19 Aug 08, 10:23
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ကွန်မင်ဒိုနဲ့ဝင်စီးတာတော်သေးတာပေါ့ကွာ.. uk အစိုး၇လို7july မှာ ခရီးသွားတွေအပြည့်ရှိတဲ့ ရထားနဲ့ ဘတ်စကားတွေကို ဗုံးန်းခွဲတာက ပိုဆိုးသေးတယ်. အင်ဒိုနီးရှားဆိုရင် သူ့တို့ ဘာလီကျွန်းမှာ အမေရိကန်က ဗုံးထောင်ဖေါက်ခွဲတာကို အမှန်အတိုင်းမပြောရဲလို့ အပြစ်မရှိတဲ့သူ့လူမျိုးတွေကို ထောင်ချအပြစ်ပေးရတယ်လေ
19 Aug 08, 10:24
မောင်ကျောင်းသား: ဒီအချက်ကတော့ ကိုဝိုင်းကို ထောက်ခံသဗျ။ ကျနော်တို့ ဘုန်းဘုန်းကတော့ သိုင်းပြောင်းပြန် သင်ပေးလေရဲ့။ အနာဂါတ်အရေးကို မြင်နိုင်စွမ်းရှိပေစွ။ ရှောင်လင်ကိုယ်တော်တွေ ကိုယ်ခံကောင်းလို့ တရုတ်မှာ သာသနာတည်နေတာဘဲ။
19 Aug 08, 10:25
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဒီမိုကရေစီဖြစ်ရတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားထက်စာရင် နအဖက အများကြီးချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ
19 Aug 08, 10:26
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ကိုဝိုင်ဝိုင်း အခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ နအဖကို ထိုင်ကန်တော့နေပြီလား?
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ဘုန်းကြီးတွေ သိုင်းဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း နအဖရဲ့ ထမိန်စွတ်သိုင်းပညာကိုတော့ မမှီနိုင်ပါဘူး ဟားဟားဟား
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: အမြင်မှန်ရသွားတယ်ဆိုတော့ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ
19 Aug 08, 10:27
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဦးသန်းရွှေကို ကန်တော့ဖို့မလိုပါဘူးဗျာ.. .သရဏဂုံပျက်သွားလိမ့်မယ်
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: နအဖကို ထိုင်ကန်တော့နေတာ ဒီလောကမှာ မောင်ဇော်မျိုးလို မိစ္ဆာဒိဌိပဲ ရှိသကွဲ့ မှတ်ထား
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မင်းက အမေရိကန်ကို ကန်တော့နေတာလား?
19 Aug 08, 10:28
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: နအဖက အများကြီးချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် < ချစ်တယ်ဗျိုး ချစ်တယ် ဟားဟားဟားဟား ဟားဟားဟားဟား ဟားဟားဟားဟား ဟားဟားဟားဟား ဟားဟားဟားဟား ဟားဟားဟားဟား
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဘုရ်ှလိုရုပ်သေးအစိုးရကိုများမင်းမိုလို့ ကန်တော့နေသေးတယ်ကွာ
ဟားဟား ဆိုတာ တရုပ်လို ဟုတ်တယ်လို့ပြောတာ
မင်းဦးသန်းရွှေကြီးနဲ့တွေရင် ခြေတော်တင်တာ ခံပေတော့
19 Aug 08, 10:30
မောင်ကျောင်းသား: ထမိန်စွတ်သိုင်း။ ဟား ဟား ဟား နအဖခေတ်မှာ အသစ်ထွင်ထားတဲ့ အထူးသိုင်းကွက်ကြီးပဲ။ မိုးပြို မြေပြို သိုင်းကွက်ထက် ကြောက်စရာကောင်းနေပါလား။ နအဖကို ထမိန်စွတ် သိုင်းပါရဂူဘွဲ့ ပေးလိုက်ပြီဗျို့။
19 Aug 08, 10:31
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: သန်းရွှေက ဇော်မျိုးမှ ဇော်မျိုးပဲ တဲ့ မာမီမျိုးရဲ့ ဟားဟာဟား x 1000000
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မင်းက အလကားနေရင်းပေါက်ရပြောနေပြီ.. သူပါးစပ်က ဘာပြောလဲမသိဘူး..သူ့ပစ္စည်းကတော့ မင်းအထဲမှာပဲ
19 Aug 08, 10:32
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: ကိုဇော်မျိုးအခုဘာတွေပြောနေသလဲပဲကြည့် ထမိန်စွတ်သိုင်းကွက်နဲ့ လေ ဟားဟားဟား
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: မင်းကလဲ မင်းယောကျား ဦးသန်းရွှေအကွက်တွေကိုပဲ မျက်စိထဲစွဲနေတယ်ထင်ပါ့
19 Aug 08, 10:33
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: နိုင်ငံရေးသမားကြီး စကားတွေက ထမိန်စွတ်သိုင်းကွက်ကို ထုတ်သုံးနေသလိုပဲနော် ဟားဟားဟား
19 Aug 08, 10:34
မောင်ကျောင်းသား: ကိုမိစ္ဆာလဲ ထမိန်စွတ် အထူးသိုင်းကွက်ကြီးကို တတ်နေသလားဗျ။ အရိပ်မဲ့လက်ဝါးတစ်ထောင်ထက် ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျ။ တယ်တော်တဲ့ ကိုမိစ္ဆာဘဲ။ ဒီပညာထူးတွေလဲ တတ်သေးသကိုးဗျ။
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ကဲကဲတော်ပြီဗျာ.. အရေမရအဖတ်မရ ပြောတဲ့နေရာမှာ ဒီမိုငတုံးတွေက အများကြီးသာတယ်.. ကဲကဲ အရှုံးပေးပါတယ်.. အရေမရအဖတ်မရ အတင်းပြောပါရဂူကြီးတွေရေ
ဇော်မျိုး >ဝိုင်ဝိုင်း: ဘိုင်ဘိုင်
မောင်ကျောင်းသား: ဒါကြောင့် ဇော်မျိုး ဇော်မျိုး ဆိုပြိး ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်နေတာကိုး။
19 Aug 08, 10:35
ဝိုင်ဝိုင်း >> ဇော်မျိုး: လေးစားပါတယ် မောင်ဇော်မျိုး ။နအဖ အောက်ဆွဲ ထမိန်စွတ်သိုင်းကွက်ခါးပတ်နက်ပိုင်ရှင် မိစ္ဆာဒိဌိကြီး
ဇော်မျိုးဆိုတဲ့လူ ဘယ်လောက် တယူသန်လဲဆိုတာ သိရအောင် (ကျနော်လဲ မောင်ကျောင်းသားရဲ့ ဒီမိုကရေစိကို ကြိုက်လို့) သူတို့ရဲ့ ဆွေးနွေးခန်းကို တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
20 Aug 08, 07:46
မောင်ကျောင်းသား: အာရုံရတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကများ နာမည်တနေသလား။ မှန်း အော် ၁၁၁။ အာ ကိုမိစ္ဆာဒိဌိနှင်း ကို ၁၁၁ တို့ စစ်ခင်းနေပါလား။ ကိုမိစ္ဆာရဲ့ အမြင်က ဆိုးဆိုးယွားယွားကို ဖေါက်ပြန်နေတာပဲ။ ကျနော်တို့ ဘကကျောင်းက အဆုံးအမနှင့် အတော်ကွာပါလား။ အေးလေ ဘုရား တရားမရှိတဲ့နေရာမှာကြီး မဟုတ်တာတွေကိုဘဲ လေ့လားခဲ့တော့ မြန်မာ့အမြင်မှာ ရုပ်ဆိုးတာပေါ
20 Aug 08, 07:50
မောင်ကျောင်းသား: ဒါပေမဲ့ ဘုရားတရားနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်ကိုသုံးပြီး ဘုရားတရားလိုလို လုပ်တာတော့ အလွန်ယုတ်မာဆိုးယွားတဲ့ လုပ်ရပ်ဘဲခင်ဗျာ။ မကျင့်နိုင်ရင်လဲ နေပါ။ မစော်ကားပါနဲ့လို့ စေတနာဖြင့် တောင်းပန်ပါတယ် ကိုမိစ္ဆာ
ဓမ္မ+ကရ+စီ= တရားမျှတစွာ ပြောဆို ပြုလုပ်ခြင်း(အုပ်ချုပ်ခြင်း)။ အမေရိကန်က ဒီမိုကရေစီက မစစ်လို့ပေါ့ကိုမိစ္ဆာရာ။ ရှင်းနေတာဘဲ။ ဒိုမိုအစစ်ကို ချပြမှသာ ကိုမိစ္ဆာကို လေးစားမှာပေါ့။ ကိုမိစ္ဆာက ထမိန်စွတ်သိုင်းပါရဂူလို့ မပြောရဘူး။ မျောက်ကို လူဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့လူဘဲ။
20 Aug 08, 07:56
မောင်ကျောင်းသား: ကဲ ဒိလောက်ဆို ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နားလည်ရောပေါ့။ ဘာမှ မသိဘဲ ဝေဘန်တာတော့ မကောင်းဘူး။ ပါဠိကိုလဲ ပလိလို့ ပြောလိုပြော။ လူသတ်တာကိုလဲ ဒီမိုကရေစီလို့ ပြောလိုပြော။ ကိုမိစ္ဆာကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေဘူးလား။
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဘာလဲဗျ? ဘုရ်ှလို စကားလှလှလေးပြောပြီး လူသတ်တာကတော့ ကောင်းတယ်ပေါ့? စကားလှလှလေးသုံးပြီး ဒေါ်ကော်ပီစုလို ပြည်သူတွေ ငတ်ပြတ်အောင် စီးပွားရေးသပိတ်မှောက်တာတော့ ကောင်းတယ်ပေါ့?
20 Aug 08, 07:57
မောင်ကျောင်းသား: ကျနော်က ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်ဗျ။ လေးတန်းအောင် ငါးတန်းတက်မဲ့ ကျောင်းသားကြီးပါ။ ဒို့ဘုန်းဘုန်းက လူသားဆန်ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီလို့ မကြာခဏ မိန့်တယ်ခင်ဗျ။ ဘုရားဟောနှင့် အညီတဲ့။
20 Aug 08, 07:59
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: အဲဒါဆိုရင်တော့ စာအုပ်ပေါ်က သီအိုရီကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီထက် လူသားဆန်တာ ဆိုရှယ်လစ်ပဲဗျ.. သူက ဆင်းရဲသားတွေအတွက်အများကြီးပြန်ကြည့်ထားတယ်
မောင်ကျောင်းသား: ဘုရှ် လူသားမဆန်ရင် ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူးဗျ။ တိရိစ္ဆာန်တောင် အသိတရားရှိရင် သူပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ဒိမိုကရေစီပဲလို့ ဘုန်းဘုန်းပြောဘူးတယ်။ ဘုရားလောင်းတိရိစ္ဆာန်တွေ ဒီမိုကျင့်သုံးသတဲ့ဗျ။
20 Aug 08, 08:00
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဒါဆိုလဲ မြန်မာပြည်ကြီးဟာ ဒီမိုကရေစီရနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ
မောင်ကျောင်းသား: ဦးနေ၀င်းကျင့်သုံးတာ ဆိုရှယ်လစ်ဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ၈၈ မှာ သတ်လိုက်တဲ့လူ။ နိုင်ငံမွဲအောင်လုပ်တယ်။ အဲဒါ ခွေးဆိုရှယ်လစ်ဘဲဗျ။
20 Aug 08, 08:01
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဘုရ်ှသုံးတာလဲ ဒီမိုကရေစီပဲ.. သူကျင့်သုံးတဲ့ဒီမိုကရေစီဟာ ခေတ်တလျှောက်လုံးလူတွေသတ်ဖြတ်လာတာပဲ
မောင်ကျောင်းသား: လူဒီလောက်သတ်တာ တရားဒီလောက်မဲ့တာ ဘယ်လိုလုပ် ဒီမိုကရေစီရမှာလဲ။ ဒါကြေားင့် ဘုန်းတော်ကြီးတွေ မနေနိုင်ဘဲ ၀င်ပြောဟောရတာကလား။
20 Aug 08, 08:02
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဘုန်းကြီးတွေက မနေနိုင်ရင် မေတ္တာရပ်ခံလို့ရပါတယ်။ ဒို့အရေးလုပ်စရာမလိုသလို ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်အိမ်ရှေ့လည်းသွားစရာ မလိုပါဘူး
မောင်ကျောင်းသား: ဘုရ်ှရဲ့ ဒီမိုက မစစ်လို့ပေှါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားလဲ တော်တော်ဝေးတာလဲ။ တွေးတာကိုက အဖြောင့်မတွေးတော့ ဖြောင့်မတ်တဲ့အတွေးလဲ ဘယ်တော့မှ ရမှာမဟုတ်ဘူး ကိုဖေါက်ပြန်ကြီးရဲ့
20 Aug 08, 08:03
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဦးနေ၀င်းလဲ ဆိုရှယ်လစ်မစစ်လို့ပေါ့ဗျာ
မောင်ကျောင်းသား: ဒို့အရေး မလုပ်ပါဘူးဗျ။ သပိတ်မှောက်တာပဲ။ အဲဒါလဲ လူ့အခွင့်အရေးပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ တိပိဋကဆရာတော်ကြီးတွေကို ဖမ်းချုပ် အမှုလုပ် ထောင်ချတာ ကြည့်ပါအုံး။
20 Aug 08, 08:04
မောင်ကျောင်းသား: ဟုတ်ပ။ လုံးဝ မစစ်လို့ပေါ့။ ကိုမိစ္ဆာ နဲနဲနီးလာပြီ
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဒါဆိုလဲ ဆိုရှယ်လစ်ကိုတောင်းဆိုကျတာပေါ့ဗျာ..ဘာအတွက်များ ဒီမိုကရေစီတောင်းနေသေးလဲ?
20 Aug 08, 08:06
မောင်ကျောင်းသား: ဘုရားခေတ်ကလဲ သံဃာတော်တစ်ပါးကို စော်ကားလို့ ဘုရင့်သားတော်တစ်ပါးကိုတောင် ဘုရားက သပိတ်မှောက်ဘို့ ခွင့်ပြုခဲ့တာပဲ။ စာကောင်းတွေလဲ ဖတ်ပါအုံး ကိုမိစ္ဆာကြီးရေ။ တော်ကြာ တစ်မှားထဲ မှားနေရင် သံသရာက မလွယ်ဘူးဗျ။
20 Aug 08, 08:07
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: နအဖ သံဃာကိုစော်ကားတယ်လို့ အဓိပါယ်ဖွင့်လို့မရသေးပါဘူး
20 Aug 08, 08:08
မောင်ကျောင်းသား: ကိုမိစ္ဆာက ဒီမိုကရေစီကို လုံးဝနားမလည်ပါလား။ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ ဒုံးဝေးနေပါလား။ ဒီမိုကရေစီအစစ်ကို နားလည်အောင် ဘုန်းဘုန်းတွေက ဟောပြောနေရတာ။ အဲဒါကိုအစိုးရကအစ လူတွေနားလည်အောင် ရေးရတယ်။
20 Aug 08, 08:09
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်က ဒီမိုကရေစီဘာလဲဆိုတဲ့စာအုပ်တွေ မဖတ်ပါ။ လက်တွေ့တော့ ဆိုရှယ်လစ်မှာတောင် မသတ်ဖြတ်တဲ့ လူသတ်မှုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်နေပါတယ်
မောင်ကျောင်းသား: အဲဒါက ကိုမိစ္ဆာရဲ့ အာဘော်ကိုးဗျ။ သပိတ်မှောက်နိုင်တဲ့ အချက်ရှစ်ချက်ကို ကိုမိစ္ဆာက မဖတ်ဘဲ ပင်ဖိတ်ငြင်းနေတာကိုးဗျ။ ဘယ်အရာမဆို လေ့လာပြိးမှ ဆရာတော်တွေကို ဝေဘန်တာကောင်းတယ်ဗျ။
20 Aug 08, 08:10
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဟုတ်ပါတယ်.. အချက်တွေထဲမှာ ပုခုက္ကူ ဓါတ်ုတိုင်မှာ ချီပြီးအရိုက်ခံတဲ့သံဃာတွေကိုတောင်းပန်ဖို့ပါနေပါတယ်။ အဲဒီသတင်းက မှန်ရဲ့လားဆိုတာ ဘယ်လ
20 Aug 08, 08:11
မောင်ကျောင်းသား: လုပ်ပြန်ပြီး။ ဖတ်စရာ မလိုပါဘူး။ တရားမျှတရင် တရားနှင့်ညီရင် လူသားဆန်ဆန်လုပ်ရင် ဒီမိုကရေစီဘဲလေ။ ကိုမိစ္ဆာရေ ယောနိသောမနသိကာရ(မှန်ကန်စွာတွေး)ရှိမှ ဒီမိုကရေစီကို နားလည်မယ်။ ဒီအကြောင်းကို ရေးပါလားဗျာ။
20 Aug 08, 08:12
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: တရားမျှတရင် ဆိုရှယ်လစ်ပါပဲတဲ့ဗျာ
ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရတွေ လူသတ်တာတွေတော့ မပြောနဲ့နော်
20 Aug 08, 08:13
မောင်ကျောင်းသား: ဘုန်းကြီးဆိုတာ ငတုံးလို့ မှတ်နေတာ မှားတာဘဲဗျ။ လူမှာအကြံနဲ့ ခရုမှာတော် အဆံနဲ့တဲ့ဗျ။ နအဖက မီဒီယားတွေကို ဘယ်လောက်ပိတ်ပိတ် အမှန်တရားကို ဖုံးလို့ မရဘူး
ကျနော်က ဘယ်လူသတ်မှုမှ မထောက်ခံဘူး။ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးကောင်းကျိုးက လွဲရင်ပေါ့ဗျာ ။ သေချာဖတ်ပြီးမှ ဝေဘန်ပါ ကိုမိစ္ဆာ
20 Aug 08, 08:15
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: အမှန်တရားကို ခင်ဗျားလဲမသိဘူး.. ကျွန်တော်လဲ မသိဘူး.. ဘုန်းကြီးတွေလဲ မသိဘူး.. ခင်ဗျား သိပ်ပြီးကဗျာဆန်မနေနဲ့ အမေရိကန်က ဒီမိုမီဒီယာတွေကို လစဉ်ဒေါ်လာငွေတွေပေးပြီး အသံလွှင့်ခိုင်းနေတာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဗျ.. အဲဒါနားလည်ပါ
20 Aug 08, 08:16
မောင်ကျောင်းသား: တိပိဋကဆရာတော်ကြီးများ ဦးဆောင်တဲ့ သပိတ်မှောက်မှုမှာ အမှုကို မသေချာ သေချာအောင် စုံစမ်းပြီးမှ သပိတ်မှောက်တာဗျ။ ဘုရားခေတ်က ရာဖမင်းသားဟာ အသိညာဏ်ရှိလို့ သံဃာကို တောင်းပန်သွားတာ။ လူမိုက်မဟုတ်လို့ပေါ့ဗျ။
20 Aug 08, 08:17
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဟုတ်ပါပြီ.. သပိတ်မှောက်ရင် ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်အိမ်ရှေ့သွားဖို့မလိုဘူးထင်တယ်
20 Aug 08, 08:18
မောင်ကျောင်းသား: အဲဒါလဲ ကောင်းတယ်လို့ မပြောရပါလား။ ကိုမိစ္ဆာက ကိုယ်လိုရာလဲ ကိုယ်စွဲနေတော့ အမှန်တရားကိုဘယ်မြင်တော့မှာလဲဗျာ။ တရားဘက်နေပြီး တစ်ခါလောက်တွေးကြည့်ပါ ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတာ ညာဏ်ထဲမှာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဟုတ်ပါတယ်.. ဒီမိုကရေစီအတွက်အော်မှ မှန်ကန်တယ်ခင်ဗျားထင်တာကိုး.. ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေ လူသတ်တာကိုလဲ ခင်ဗျားတို့က သည်းခံနိုင်တာကိုး
20 Aug 08, 08:19
မောင်ကျောင်းသား: ကျနောပြောတာ ၈၈ က အကြောင်းဗျ။ ပိဋကတ်စာပေ နှံ့စပ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ထောင်ထဲထည့်ထားတာလေ။
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: နအဖလူသတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ဒီမိုအစိုးရလူသတ်ပုံယှဉ်ကြည့်ပါ.. နအဖက သူ့အာဏာကို ထိခိုက်လို့သတ်ဖြတ်ရတာ.. ဒီမိုအစိုးရသတ်ဖြတ်တာက အကြောင်းမဲ့သတ်ဖြတ်တာ..ယှဉ်တွေးကြည့်ပေါ့ဗျာ
၈၈ တုံးက ဦးသန်းရွှေအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ.. ပေါက်ဖော်ကြီး ဦးရှုမောင်လက်ထက်
20 Aug 08, 08:21
မောင်ကျောင်းသား: ကိုမိစ္ဆာကို ကျနော်ပြောတာကို မကြည့်ဘဲ။ ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်စွတ်ပြောနေ စွပ်စွဲနေပါလား။ အာသိဝသောပမ-ဒီအယူမျိုါ် ယူသူဟာ အဆိပ်ပြင်းတဲ့မြွေထက် ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ ဘုရားကဟောတယ်ဗျ။ ဝေးဝေးရှောင်ရမယ်တဲ့။
20 Aug 08, 08:22
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကြက်ခတ်ဝိုင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသတို့ကို နမူနာကြည့်ပါ.. အပြစ်တင်တာဘယ်လောက်ခံခဲ့ရလဲ၊
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: အေးလေဗျာ.. ဒီမိုအစိုးရလူတစ်သောင်းသတ်တာကို သာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ ဝေေးဝေးရှောင်တော့ ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ဗျာ
20 Aug 08, 08:23
မောင်ကျောင်းသား: ဦးနေ၀င်း။ဦးစောမောင်(သူက လူသားဆန်သေး)။ ဦးသန်းရွှေ အားလုံးဟာ တူတူဘဲ။ သံဃာတော်တွေကို ထောင်ချတာ ဦးနေ၀င်းမဟုတ်ဘူး။ ဦးခင်ညွန့်တို့ ဦးသန်းရွှေတို့ ချတာ။ မငြင်းနဲ့။
20 Aug 08, 08:24
မောင်ကျောင်းသား: ကျနော်တို့က ထိုဆရာတော်ကြီးတွေကို အပြစ်မတင်သလို ကျနော်တို့ ဘုန်းဘုန်းတွေကလဲ အပြစ်မတင်ပါဘူး။ သံဃာကို မပြစ်မှားမိဘို့ဘဲ အမြဲတန်းဆုံးမ သြ၀ါဒပေးပါတယ်။ ကိုမိစ္ဆာလို ကိုယ်လိုရာ မတွေးပါဘူး
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: အေးလေဗျာ.. သဃာတွေက သူတို့ထိုင်ခုံကိုလာလှုပ်တယ်ထင်လို့ထောင်ချတာပေါ့... ၈၈တုံးက ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဒီမိုသမားတွေက အပြစ်တင်တာ ဘာမှ အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဗျ
20 Aug 08, 08:26
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ကျနော်ကတော့ ရိုးရိုးပဲမြင်ပါတယ်။ အစ်ကိုကသာ ၀ါဒတူတွေ ဘုန်းကြီးတွေကို အပြစ်တင်တဲ့အချိန်မှာ ဘာမှမပြောပဲ ဦးသန်းရွှေတို့ထောင်ချတာကို အပြစ်တင်တာ မှန်ကန်ရဲ့လား?
မောင်ကျောင်းသား: တရားမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင် ကိုမိစ္ဆာဟာ ပြင်းထန်ပြီး ဆိုးယွားဖေါက်ပြန်တဲ့အယူကို ယူမိနေပြီလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ဘုရားခေတ်မှာလဲ ဘုရားဟောတာကို လက်မခံတဲ့လူ ရေတွက်လို့မရပါဘူး။ ကိုမိစ္ဆာလဲ အဲဒီထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပုံရတယ်။
20 Aug 08, 08:27
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ.. ဒီမိုသမားတွေ ဘုန်းကြီးတွေကို ပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက်လည်း လေးစားမိပါတယ်..
ဒီမိုအစိုးရတွေ လူသတ်တာကို လက်ခံတဲ့အတွက်လည်း လေးစားမိပါတယ်
20 Aug 08, 08:28
မောင်ကျောင်းသား: ကျနော်က ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဆိုတော့ ညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအတွေးတွေ မသိပါဘူ။ ဘုန်းကြိးဆိုတာ ၀ိနည်းရှိပါတယ်။ သူတို့က ကျနော်တို့လူပြိန်းတွေထက် အများကြီးနားလည်ကြပါတယ်။
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဘုန်းကြီးတွေကို ကျနော်က အရမ်းကိုလေးစားပါတယ်.. ကြည်ညိုပါတယ်. .သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကို ဖျာပုံမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ပါတယ်.. ရှိခိုးခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမယ့်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘုန်းကြီးတွေ အသုံးချခံဖြစ်နေတာကိုတော့ သဘောမကျဘူး
20 Aug 08, 08:30
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဒီမိုသမားဆိုတဲ့သူတွေကို ကနေဒါနဲ့ အမေရိကန်မှာမြင်ဖူးတယ်.. ငွေလိမ်စားနေတဲ့သူတွေချည်းပဲ.. ဘယ်ကောင်မှကောင်းတဲ့ကောင်မရှိဘူး..
မောင်ကျောင်းသား: ခက်ပါလား။ ကျနော်ပြောနေတာ ကိုမိစ္ဆာမဖတ်ပါလား။ ကျနော်က မတရားလူသတ်တဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှ မထောက်ခံဘူး။ ဒီမိုဟုတ် မဟုတ်ဆိုတာလဲ ခွဲဝေနိင်တယ်။ သူများပါးစပ်နဲ့ အလုပ်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဘီဘိစီ အာဖက်ဖေတို့ပြောတိုင်းလဲ ယုံသူမဟုတ်ပါဘူး။ တရားရှုဒေါင့်ကဘဲ ချိန်ထိုးပြီး ပြောနေတာပါ။ ကိုမိစ္ဆာက ကျနော်ထက် ၀ါရင့်ပါတယ်။ ကျနော်က မူလတန်းကျောင်းသားအသိ အမြင်နဲ့ဘဲ ပြောနေတာပါ။
20 Aug 08, 08:31
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: မင်းက မထောက်ခံဘူးသာ ပြောတယ်.. ဒီမိုအစိုးရလူသတ်တာ.. ဒီမိုသမားတွေ ဘုန်းကြီးတွေကို တိုက်ခိုက်တာကျတော့ နှုတ်ပိတ်နေတယ်
20 Aug 08, 08:32
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: မင်းတို့က ၁၀ ယောက်ပေါင်းလို့ သူငယ်တန်းအဆင့်တောင်မှမရှိတာ.. မင်းတို့လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဟာ လူသတ်စံနစ်ကြီးဆိုတာ လက်မခံနိုင်တာ တကယ်ကို အံ့သြတယ်.. စာအုပ်ပေါ်မှာရေးထားတာ မကြည့်နဲ့ လက်တွေ့ကိုကြည့်ပါ
20 Aug 08, 08:33
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: စာအုပ်ပေါ်မှာရေးထားတာကောင်းလို့ မင်းတို့ အဲဒီစံနစ်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင် လိမ်တဲ့သူအပြစ်မဟုတ်ဘူး.. ဥာဏ်မရှိတဲ့ ခင်ဗျားတို့အပြစ်ပဲဗျ
မောင်ကျောင်းသား: ကျနော်က ကိုယ့်အိမ်တွင်းရေးဘဲ ပြောချင်တယ်။ သူများအိမ်တွင်းရေးပြောတာ အန္တရာယ်များတယ်။ ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာတာနဲ့တူတူဘဲ။ သို့သော် မပြောတဲ့အတွက် ထောက်ခံတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ အဲဒါ လူညစ်တွေသုံးတဲ့ အသုံးဗျ။
20 Aug 08, 08:34
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: မင်းက ဒါဆိုရင် အိမ်တွင်းရေးပဲကြည့်ပြီး ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်ဆိုရင် မင်းဟာ တော်တော်ကို အမြင်ကျဉ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ..
မောင်ကျောင်းသား: နေပါအုံး ကျနော်ပြောတဲ့ ဘုရားပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီက မကောင်းလို့လားဗျာ။
20 Aug 08, 08:35
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: မင်းကလဲတကယ်ကိုကြောင်တယ်.. ဒီမိုကရေစီစံနစ်နဲ့ ဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူး.. ပေါက်ကရတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ဗျာ
20 Aug 08, 08:36
မောင်ကျောင်းသား: ကျနော်တို့နိုင်ငံ(အိမ်)မှာ ဘုရားပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရှိစေချင်ဗျာ။ ဒါမှ ဒို့မြန်မာဗုဒ်ဓဘာသာဆြို့ပီး ၀င့်ကြွားနိုင်မှာဗျ။
အဲဒါ စာကောင်း ပေကောင်းတွေ မဖတ်ဘူးဆိုတာ ထင်ရှားနေတာပေါ့။
20 Aug 08, 08:37
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: မင်းလဲမနိုင်ဘူး.. ဘုရားကို အလကားနေရင်း နာမည်ဖျက်ဦးမယ်.. ဘယ်ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှ ဘုရားမပေးဘူး.. ဒီမိုငတုံးတွေအလိမ်ထိပြီထင်တယ်
မောင်ကျောင်းသား: အခုတော့ ငါတို့ဟာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ်ဓဘာသာဆိုပြီး မတရား ဥပဒေမဲ့ လူသတ်ပြတာတော့ မကြိုက်ဘူးဗျာ။
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်းတွေမှာ ဒီမိုကရေစီစာလုံးတွေအများကြီးပါနေတယ်.. မင်းအဲဒါတကယ်ဗိုလ်ချုပ်ပြောတယ်ထင်သလား?
ဥပဒေမဲ့သတ်သတ်.. ဥပဒေရှိသတ်သတ် ဘာထူးလဲ?
လောကမှာ လိမ်ညာဆုံးက ဒီမိုသမားတွေပဲ.. အဲဒါမင်းနားလည်ထားပါ
20 Aug 08, 08:39
မောင်ကျောင်းသား: ကျနော်တို့ ဘုန်းဘုန်းတွေ ပြောတာပါ။ ငတုံး မဟုတ်ပါဘူး။ ပိဋကတ်ကို နှံ့စပ်အောင် လေ့လာထားတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေပါ။ မင်းကျင့်တရားနှင့်အညီးကျင့်ရင် ဒီမိုကရေစီပေါ့ဗျ။ နားလည်တယ်ထင်လို့ မပြောသေးဘဲနေတာ။ ကိုမိစ္ဆာက သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ တယ်ဝေးတာကိုး။
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဆရာတော်ကြီးတွေက မင်းကျင့်တရားအထိပဲ သိမယ်.. ဒီမိုကရေစီအကြောင်းကိုတော့ ကျနော်တို့ ပုထုစဉ်တွေထက်ပိုမသိနိုင်ဘူးဗျ
ကျနော်တို့က တောသားနှစ်ယောက်စလုံးက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနှစ်ခုစလုံးမှာ နေထိုင်နေတဲ့သူတွေ.. လိမ်ညာလှည့်ပတ်ထားတာတွေကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်
20 Aug 08, 08:41
မောင်ကျောင်းသား: စာကောင်းပေကောင်းတွေ ကြိုးစားပြီး ဘ၀ကို အနှစ်သာရရှိရှိ လူသားဆန်တဲ့ အတွေး အပြောအဆို အလုပ်တွေ ဆည်းပူးနိုင်ပါစေဗျာ။ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်ပါပြီ။ မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင် ဖြူစင်စိတ်ကိုထားနိုင်ပါစေ။
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: ဒီဘက်ရော်ကတဲ့ မြန်မာတွေက အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါရောက်ရင် စက်ရုံတွေထဲမှာလုပ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေကျတာ.. သူတို့က ဒီမိုမီဒီယာတွေနားထောင်တာကလွဲလို့ ဘာမှ သိတာမရှိဘူး
စာကောင်း ပေကောင်းက လိမ်ညာတာ မပါဘူးဗျ.. ခင်ဗျားတို့ဖတ်တဲ့စာတွေက ဒီမိုသမားတွေလိမ်ညာဝါဒဖြန့်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေပါ.. အမြင်မှန်ကိုရပါစေ
20 Aug 08, 08:43
မောင်ကျောင်းသား: စိတ်ဖြူစင်ပြ၊ီး စိတ်ချမ်းသားစွာ နေနိုင်ကြပါစေ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လိမ်ညာ လှည့်ဖျားမှုမှ ကင်းဝင်းကြပါစေ။ ကောင်းသောနေ့များစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်။( ဘုန်းကြီးကျောင်းသား-လေးတန်းအောင်)
20 Aug 08, 08:44
ဇော်မျိုး >မောင်ကျောင်းသာ: တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးလိမ်ညာမှုကင်းချင်ရင် ဒီမိုသမားတွေကို ရှင်းပြစ်ပါ
ဒီမိုမီဒီယာတွေကို မဖတ်ပါနဲ့. .နားမထောင်ပါနဲ့
20 Aug 08, 09:31
SSM>ဇော်မျိူး: ရျင်းပစ်ပါ ဆိုပါလား ။ တယ်ရင့်ပါလား ဇော်မျိူး သတ်ဖို့ ဘဲစဉ်းစားနေတယ်
မနေ့ကတယောက်ပြောတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ္ဆ ဆိုတဲ့လူစားမျိူးလား ဇော်မျိူး
20 Aug 08, 09:43
အက်စစ်: ဇော်မျိုးစောက်ရူး..ဟိုကသတ်တာ သူလူမျိုးမဟုတ်ဘူး..မင်းပထွေးကသတ်နေတာကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းကွ..နာလပိန်းတုန်ရ
20 Aug 08, 11:50
ဇော်မျိုး > အက်စစ်: ဟိုက သတ်တာ သူ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောကတည်းက ဒီမိုသမားစစ်စစ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ 9/11 မှာ ဗုံးနဲ့ဖေါက်ခွဲလို့သေသွားတဲ့အမေရိကန်တွေ အရိုးတောင်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဗျာ
20 Aug 08, 11:51
ArKar: ကိုကျောင်းသားမှာလဲ ဘုရားတရားတွေကြီးပြောနေလို့ သူတော်ကောင်းကြီးမှတ်နေတာ နောက်ဆုံးတော့ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တာမြှောက်ပေးတဲ့ အဓိပါယ်သက်ရောက်နေတယ်
ဘာသာရေးလုပ်တဲ့သူတွေက နိုင်ငံရေးဝင်လုပ်ပြီး လူတွေလိုကျင့်လို့မသင့်တော် လူတွေကသာဘာသာရေးလုပ်ပြီး ဘုရားတရားတော်တွေ ကျင့်တာပိုသင့်တော်ပါတယ်
20 Aug 08, 12:05
ArKar: ဒီလိုဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဘာသာရေးကိုပါထိခိုက်ပါတယ် ကြာရင်လူတွေက သူ့ဘုန်းကြီးကိုယ့်ဘုန်းကြီး အပြိုင်မကောင်းပြောပြီး ကြားကဘုန်းကြီးတွေလဲထိခိုက်ပြီး ဘာသာရေးကိုလဲမှေးမှိန်အေင် အားပေးနေသလိုပါပဲ
20 Aug 08, 12:25
ArKar: ကိုကျောင်းသားက တရားပေါက်တဲ့လေသံနဲ့ ပြောသလိုလို သူတော်စင်လေသံနဲ့ပြောသလိုလို တရားလာဟောသလိုလို နောက်ဆုံးတော့လဲလိုရင်းက သူတဖက်သားကို မကောင်းကြောင်းလာကဲ့ရဲ့သလိုလို ပြောင်သလိုလိုနဲ့ စကားလာများတာကို
20 Aug 08, 12:26
ArKar: စကားလာများတာကို ဘုန်းကြီးကတွေဆွဲထည့်လိုက် ဘုရားတရားတွေဆွဲထည့်လိုက်နဲ့ ဘုရားတရားတွေပါ ကိုကျောင်းသားကြောင့် လူအရိုသေတန်ပါတယ်ဗျ
အသုံးမချစမ်ပါနဲ့ဗျာ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားကို ရိုးရိုးသားသားပြောစမ်းပါဗျာ
20 Aug 08, 13:58
စောသစ္စာ: အကုသိုလ်ပြုရာ၌ ကိုယ်တိုင်ပြုသူ စေခိုင်းသူ သဘောတူသူ ချီးမွမ်းသူ အားလုံးဟာ တူညီသော အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဘုရားဟောတာ ဖတ်ဘူးပါတယ်။
20 Aug 08, 14:00
စောသစ္စာ: မောင်ကျောင်းသားပြောတဲ့ မင်းကျင့်တရားအတိုင်း ကျင့်ရင် ဒီမိုကရေစီဘဲဆိုတာ သိပ်မှန်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေကို နိုင်ငံရေးလုပ်တာမြှောက်ပေးတယ်လို့ ပြောရလောက်အောင်
20 Aug 08, 14:02
စောသစ္စာ: ဘယ်ဆရာတော်မှ ငတုံးမဟုတ်ပါဘူး။ တရားဟောတဲ့ ဆရာတော်အားလုံးဟာ ဘုရားဟောတရားတွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဟောနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များသာ တွေ့ရပါတယ်။ မင်းတို့အသိလောက်နဲ့ ဆရာတော်တွေကို ဝေဘန်တာ ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။
20 Aug 08, 14:03
စောသစ္စာ: ဆရာတော်ဦးညာဏိဿရ၏ မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးခွေကိုလဲ မင်းတို့ ရှရှားက ကောင်လေးတွေ အပါတ်စဉ်တရားပွဲမှာ ထည့်နာပါအုံး။ နိုင်ငံရေးလား ဘုရားဟောလားဆိုတာ သိရအောင်။
20 Aug 08, 14:04
စောသစ္စာ: ကျုပ်ရယ်ချင်တာက မင်းတို့လို မလောက်လေး မလောက်စား စာတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဖတ်ရုံနဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဝေဘန်တာဘဲ။ မင်းတို့ဟာ တော်တော်ရယ်ဘို့ ကောင်းတာပဲ။
20 Aug 08, 14:06
စောသစ္စာ: ဘုရားတရားဆိုတာ လိုက်နာရင် လိုက်နာသူ မည်သူမဆို အကျိုးရှိပါတယ်။ ဘုရားတရားဟောသူကိုလဲ ဆော်ကားစရာမလိုဘူး။ သတ္တ၀ါအားလုံးအတွက် ဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်နှင့်မကိုက်တာလဲ ရှိတာပဲ။ အဲလိုရှိတိုင်း နိုင်ငံရေးလို့
20 Aug 08, 14:07
စောသစ္စာ: ပြောရင် ကိုယ်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာတာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တူးဖြိုရာ ရောက်ပါတယ်။
20 Aug 08, 14:08
စောသစ္စာ: ပြောလိုက်အုံးမယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီဖြစ်သည်။ မသေမချင်း မှတ် ငမျိုးရေ။
20 Aug 08, 14:30
ကျောင်းသား: ဘုန်းကြီးတွေဒို့အရေးအော်တာလား..မေတ္တာပို့တားလားဆိုတာ အာကာမင်းပြောစမ်းပါ..ဘာရဖို့ဘုန်းကြီးတွေဒီလိုလုပ်လဲလို့မင်းထင်လဲ? သူတို့လုပ်တာသူတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကွနားလည်လား
20 Aug 08, 14:36
20 Aug 08, 14:39
ကျောင်းသား: မင်းသိထားဖို့ကမင်းတို့ဖင်ပိတ်ငြင်းပြီးကာကွယ်ပေးနေတဲ့ နအဖအုပ်စုဟာ အရိုင်းအစိုင်းအုပ်စုပဲဆိုတာ..အဲလိုလူမျိုးကိုကာကွယ်ပေးနေရင် မင်းတို့ဟာလဲအရိုင်းအစိုင်းကောင်ပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်
20 Aug 08, 14:44
111: ခင်ဗျားတို့ပြောတာ ကျနော် နားမလည်ဘူး။ ကျနော်မြင်တာက မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးမှာ ဘာသာရေးမပါရင် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေလို့ မြင်တယ်။ နအဖဟာ ဘုန်းကြီးမရှိဘူးဆိုရင် အာဏာကို လက်လွတ်ရတာ ကြာပြီလို့ မြင်တယ
20 Aug 08, 14:46
111: နအဖဟာ ဘုန်းကြီးတွေကို သူ့နိုင်ငံရေးအတွက်ဘဲ အသုံးချတယ်လို့ မြင်တယ်။ သူ့နိုင်ငံရေး သူ့အကျိုးကို ထိရင်တော့ ဘယ်ဘုန်းကြီးမှ မရှောင်ဘူးဆိုတာ သမိုင်းကြောင်းအရ ရှင်းတယ်။ ဒါက ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်တဲ့ ကိစ္စဘဲ။
20 Aug 08, 14:48
111: ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားက သူ့အကျိုးရှိရင် သူ့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရင် အဲဒီစကားတစ်လုံးကိုဘဲ အမြဲတန်းယူပြီး သူ့ကိုယ်သူ ကာကွယ်တယ်။ သတင်းစာဖတ်တဲ့လူတိုင်း ဒါကို သိပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ကျနော် သတိထားမိတဲ့အချက်ပါ
20 Aug 08, 14:50
111: ဘုန်းကြီးလဲ ပုထုဇဉ်ဘဲဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ် ဘုန်းကြီးတိုင်းကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်မှာလဲ။ ဆိုးတဲ့ ၀ိနည်းနဲ့ မညီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုန်းကြီးအားလုံးကို သိမ်းကြုံးပြီး အပြစ်တင်မစောသင့်
20 Aug 08, 14:52
111: ပြီးတော့ ဘုရားတရားကို လူတွေနားလည်အောင် ဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုလဲ မဝေဘန်သင့်ပါဘူး။ သူတို့က အများကောင်းစားဘို့ ဟောနေကြတာပါ။ ကိုယ်က မဟုတ်တာလုပ်ရင် ကိုယ့်ကိုထိမှာဘဲလေ။ အဲဒါကို ပြင်ရမဲ့အစား တရားဟောသူကို
20 Aug 08, 14:54
111: အန္တရာယ်လုပ်တာကတော့ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်လွန်းတယ်လို့ မြင်တယ်ဗျ။ အဲသလို လုပ်တာ ကောင်းတယ်လို့ ဘယ်လိုမှ မြင်လို့မရပါဘူး။ အကောင်းတာကို မကောင်းမှန်းသိပြီး ရှောင်ရမှာပါ။
20 Aug 08, 14:56
111: လူတွေက(ကျနော်လဲပါ) အတ္တကိုဘဲ ရှေ့တန်းတင်တော့ အတ္တဖုံးလွမ်းပြီး အမှန်ကိုလဲ မမြင်နိုင်တော့ဘူးလေ။ မမှားတဲ့လူ မရှိပါဘူး။ မှားမှန်းသိပြီး အချိန်မီပြုပြင်နိုင်ဘို့သာ အဓိကမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ။
ငကြောင် တောသားဆိုကတည်းဘာစောက်သုံး ကျမှာလည်းကွ အညားသားတို့တောသားတို့ ဆိုတာ ရူးကြောင်မူးကြောင်တွေပါ စောက်သုံးမကျပါဘူး ဇော်မျိုးရေ ဒီမိုမကောင်းဘူးကွ ဒီမိုဘလော့တွေမသွားနဲ့ အောကား (pron movie) တင်တဲ့ ဘလော့တွေသွား ဂုဏ်သရေရှိတယ် ကြောင်ချေးဆိုအောကားတွေတင်တယ် ကောင်းတယ် ဒီမိုမရှိဘူး ဟိုမိုဘဲရှိတယ် homosexual ဆိုမင်းကြိုက်ရင် ကနေဒါက ကပ်ပလီ လီးပြေးသာစုတ်ကွ
No Reply said...
ဇော်မျိုး ဆိုတာ အစကတော့ သူတော်ကောင်းလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ နောက်မှ ခွေးသူခိုး ဖြစ်နေတာကိုး။ တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ..နိုင်ငံခြားမှာနေပြီး (ပြောတာပဲ) ဒီစစ်အစိုးရ ကောင်းကြောင်းပြောတာ ဒီအကောင်ဟာ ပထမဆုံးပဲ။
Homie မအေလိုးလေး ငါ့ဘောလာရက်ကွာ
စိတ်ကူးယဉ် ဒီမိုမှ လက်တွေ့ဒီမိုသို့